မီဒီယာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားမှု - ၁၉၉၅-၂၀၁၅ (Empirical Research State)၊ သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်
မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015 (2016)
Doi: 10.1080 / 00224499.2016.1142496
အယ်လ် Monique ရပ်ကွက်a*
အွန်လိုင်း Published: 15 မတ်လ 2016
အမျိုးသမီးများ၏လိင် objectifying ပုံဖော်ခြင်းအမျိုးသမီးများ၏အခြားသူတွေ '' ဆွဲဆောင်မှုပေါ်နှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အမျိုးသမီးရဲ့အမြင်များပေါ်တွင်ဤအကြောင်းအရာကိုမှထိတွေ့မှု၏အလားအလာသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေပြုစုပျိုးထောင်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာအတွက်မကြာခဏဖြစ်ပျက်မှုရှိပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ synthesize ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက် 1995 နှင့် 2015 အကြား peer-ပြန်လည်သုံးသပ်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဂျာနယ်များထုတ်ဝေသုတေသနအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 109 လေ့လာမှုများပါရှိသောကြောင့် 135 စာပေတစ်ဦးကစုစုပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းထိတွေ့မှုနှင့်ဤအကြောင်းအရာပုံမှန်အစည်းအဝေး, နေ့တိုင်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်အကျိုးဆက်များတစ်အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတသမတ်တည်းသက်သေအထောက်အထားများ, သာ. ကြီးမြတ် Self-objectification, လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်နှင့်ရန်ဘက်ပြုမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ပိုမိုထောက်ခံမှုပေးအဆိုပါတွေ့ရှိချက်များနှင့် အမြိုးသမီးမြားအပျေါအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံစိတ်။ ထို့အပြင်ဤအကြောင်းအရာစမ်းသပ်ထိတွေ့အမျိုးသမီးအရည်အချင်းကို, စာရိတ္တနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တခုလျော့နည်းသွားအမြင်ရှိသည်ဖို့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်နေသည်။ လက်ရှိသုတေသနချဉ်းကပ်မှုနှင့်အစီအမံများနှင့်အတူကန့်သတ်ဆှေးနှေးထားပါနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်များအတွက်အကြံပြုချက်များပေးနေကြသည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြင့်မားသောအဆင့် (ရပ်ကွက်, ဆံ့ဖို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပေမဲ့လည်း 2003; Wright, 2009), ဒါကြောင့်မီဒီယာအမျိုးသမီးများနှင့်အခြားသူများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှအပနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူခံအပေါ်အကြီးအကျယ်အလေးပေးကြောင်းအမျိုးသမီးလိင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေပါရှိပါတယ်ကြောင်းကိုလည်းအမှုဖြစ်ပါတယ်။ တင်ဆက်မှု၏ဤအမျိုးအစားတံဆိပ်ကပ်ထားပြီး objectification, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectificationဒါမှမဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ မိသားစု ၀ င်များ (ဥပမာ - Starr & Ferguson) အပါအ ၀ င်အရင်းအမြစ်များစွာမှအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်ကုသမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရငြင်းဆိုသည်ကိုအမျိုးသမီးများတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ 2012) နှင့်သက်တူရွယ်တူများ (ဥပမာ, Petersen & Hyde, 2013), သိပ်အာရုံကိုမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ မီဒီယာပေါ်မှာဤအလေးပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြိုးသမီးမြား၏ရုပျပုံမြားကို TV အစီအစဉ်များ, ဂီတဗွီဒီယိုများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအပါအဝင်, မီဒီယာကိုဖြတ်ပြီးအမြားအဖြစ်လာကြပါပြီများအတွက်ကောင်းစွာ, နေရာချခြင်း, မကြာခဏအမျိုးသမီးများကိုကိုယ်စားပြုသောကြီးစိုးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် (အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး [ယား] သည် 2007).
ဒီလေ့လာမှုနှင့်အတူ, ငါ့ရည်မှန်းချက်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏သက်ရောက်မှုကိုဖြေရှင်းလက်ရှိရှိပြီးသားပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြည့်စုံခြင်းနှင့်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးစိတ်ပညာ၊ အမျိုးသမီးလေ့လာမှုများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာစသည့်ပညာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအမျိုးမျိုးမှပညာရှင်များကဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဤနယ်ပယ်များသည်နည်းစနစ်နှင့်အသုံးအနှုန်းများကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်များတွင်ထုတ်ဝေသည်။ ဤကျယ်ပြန့်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏နားလည်မှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန်ဒီကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ လုပ်ဆောင်မှုများကိုပညာရှင်များအားဖော်ထုတ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ များစွာသောအလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်လိင်ဆက်ဆံသောအမျိုးသမီးများ (Heflick & Goldenberg၊2014; Loughnan & Pacilli, 2014ယေဘူယျအားဖြင့်မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှု (ဥပမာ Moradi & Huang၊ 2008; Murnen & Smolak, 2013), ငါ၏အရည်မှန်းချက်မျိုးစုံရလဒ်များဖြတ်ပြီးမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါငျးတို့သထုတ်ဝေသက်သေအထောက်အထား compile နှင့်အနှစ်ချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အထူးသ, ငါသည်လိင် Self-objectification, ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, objectified တစ်ဦးချင်းစီ, လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအရည်အသွေးများပေါ်တွင်မီဒီယာ objectifying မှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတစ်အလယ်တန်းရည်မှန်းချက်ကိုလယ်တစ် metalevel ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါကျန်ကြွင်းသောအရာကိုမေးခွန်းများနှင့်ပြဿနာများကိုမြင်သောဒါကိုလယ်လုပ်နေခဲ့ပြီးသောအရာကိုသတ်မှတ်ဖေါ်ပြတဲ့ပိုပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုထောင့်ပေးစေချင်တယ်။ အဆိုပါယားရဲ့လိုပဲ 2007 အစီရင်ခံစာ, ငါသည်အပိုကြီးတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ရန်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ငါတိကျတဲ့ရလဒ်များ၏အစွမ်းသတ္တိကိုဖော်ထုတ်အာရုံစိုက်မထင်သော်လည်း, Meta-သရုပ်ခွဲချဉ်းကပ်ဘို့ပိုကောင်းတော်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီအစား, ငါချဉ်းကပ်မှု, နမူနာမေးခွန်းတွေနှင့်တွေ့ရှိချက်များ၏သဘောသဘာဝသုံးသပ်အာရုံစိုက်ပါ။ ငါကပထမဦးစွာသမိုင်းရှုထောင့်ပေး, ဒီဖြစ်စဉ်၏လယ်ပြင်ရဲ့နားလည်မှုကိုစူးစမ်း။ ငါထို့နောက်မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုရည်မှတ်ဥပမာပေးပါတယ်။ တတိယအပိုင်းမှာတော့ကျနော်မီဒီယာ objectifying မှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းတင်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်။ ငါကလူယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆီသို့လူတွေရဲ့သဘောထားတွေအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွေ့မြင်မည်သို့သက်ရောက်မှုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းလေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးနှင့်အထီးသင်တန်းသားများအနေဖြင့်ဒေတာများပါဝင်သည်နှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုက်ပါ။ ငါအနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်များအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူကောက်ချက်ချ။
လိင်ကအမျိုးသမီးတွေသစ်ကိုမဟုတျပါနှင့် 1970s (ဥပမာကတည်းကကျား, မများနှင့်မီဒီယာများ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွင်းထင်ရှားတဲ့ဝေဖန်မှုပါပြီ objectify ကြောင်းမီဒီယာပုံဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ်, 1975) ။ ဤလုပ်ငန်းအတွင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်အရေအတွက်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဆိုအရ,
လူ၏ခန္ဓာကိုယ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသည်၎င်းတို့၏လက္ခဏာမှခွဲထုတ်ခြင်း၊ တူရိယာများအဆင့်အတန်းသို့လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားကိုယ်စားပြုနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည့်အခါတိုင်းလိင်ဆန္ဒပြခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအားအလောင်းကောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ အထူးသဖြင့်အခြားသူများ၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအတွက်တည်ရှိသည်။ (Fredrickson, Roberts, Noll, Quinn, & Twenge, 1998, p ။ 269)
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုလိင်အရဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတစ်ခုအနေဖြင့်သူမကိုလိင်ဆိုင်ရာကန့်ကွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များမှ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များနှောင်းပိုင်းအထိမီဒီယာသမားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်အရန့်ကွက်မှုသည်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွဲပြုခြင်းတင်ပြမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ သုတေသီများသည်အမျိုးသမီးများ၏ပုံဖော်ခြင်းကိုလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ နုံအိမ်ရှင်မများသို့မဟုတ်သားကောင်များအဖြစ်လေ့လာခဲ့သည်။ ဤပုံဖော်ချက်များကအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည် - သူတို့သည်အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်အရအခွင့်အရေးနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေသည်။ ဤလိင်အရလိင်အ ist ကြောင်းအ portr ရေးပုံဖော်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားရှိအမျိုးသမီးများ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပတ်သက်သောအမြင်ကိုကန့်သတ်ထားပါသလား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှု၏လက်ခံမှု၏တရားဝင်အစီအမံများရှိ၏ အစား၊ သုတေသီများသည်ကျားမအခန်းကဏ္ belief ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများ၊ အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲများ၊ 1995; Lavine, Sweeney, & Wagner, 1999; Rudman & Borgida, 1995).
အသစ်သောသီအိုရီများနှင့်အသစ်တိုင်းတာမှုများစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်တဲ့အခါမှာမီဒီယာရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ဆီသို့ဤသည်ချဉ်းကပ်နှောင်းပိုင်း 1990s အတွက်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ တည်ဆဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသမီးသီအိုရီအပေါ်ဆွဲနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောသုတေသနအဖွဲ့များသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်မည်သို့တစ်လိင် objectifying ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဖြေရှင်းရန်ရှာ၏။ တဦးတည်းအဖွဲ့က Nita McKinley နှင့် Janet Hyde ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1996 အတွက်သူတို့အနေနဲ့ object ကိုနှင့်ဤအတွေ့အကြုံကိုထောက်ခံသောယုံကြည်ချက်အဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အမြိုးသမီးမြားရဲ့အတှေ့အကွုံရည်ညွှန်းထားတဲ့ objectified ခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဏ် (OBC), အကဲဖြတ်ရန်တစ်စကေးဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အတည်ပြုထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ McKinley နှင့် Hyde (အဆိုအရ1996):
OBC ၏ဗဟိုသဘောတရား, ထိုဣတ္ခန္ဓာကိုယ်အထီးအလိုဆန္ဒ၏ object တစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်အောင်အထီး "အခြား" (Spitzack ၏အကြည့်ကိုလက်ခံရရှိရန်တည်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါသည် 1990) ။ အခြားသူတွေကသူတို့ကိုမြင်သည်အတိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုမြင်လျှင်, စဉ်ဆက်မပြတ် Self-စောင့်ကြည့်, အမျိုးသမီးများယဉ်ကျေးမှုခန္ဓာကိုယ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်အပျက်သဘောတရားစီရင်ပိုင်ကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပေသည်။ သူတို့ရဲ့အလောင်းအမျိုးသမီးများ၏ဆကျဆံရေးအရာဝတ္ထုနှင့်ပြင်ပအချို့ကလည်းယင်း၏ဖြစ်လာသည်; သူတို့ကိုယ်တိုင်မှအရာဝတ္ထုအဖြစ်တည်ရှိနေ။ (စ။ 183)
(ဤအယူအဆတွေ, McKinley နှင့် Hyde အပေါ်ဆွဲ1996စောင့်ကြည့်, ခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်းကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုယုံကြည်ချက်:) သုံး subscales featured ကြောင်း OBC တစ်အတိုင်းအတာတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဒုတိယသုတေသနအဖွဲ့ကဘာဘရာ Fredrickson နဲ့ Tomi-Ann Roberts ပဲ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ဤအဖွဲ့သည်အမျိုးသမီးကိုယ်ခန္ဓာအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်သောယဉ်ကျေးမှုတွင်အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုနားလည်ရန်မူဘောင်အနေဖြင့် objectification သီအိုရီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အခြားသူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ရှုမြင်ခြင်း၏အရေးပါသောအကျိုးဆက်မှာအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှတစ် ဦး ချင်းစီသည်မိမိကိုယ်ကိုလေ့လာခြင်း၏လေ့လာသုံးသပ်သူတစ် ဦး ၏ရှုထောင့်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးလာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးအားတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ရန် 'အမြင်' များအဖြစ်ရှုမြင်လာနိုင်သည်။ ” (Fredrickson & Roberts, 1997, စစ။ 179-180) ။ ဤသီအိုရီအရမီဒီယာကိုဤရှုထောင့်မှထုတ်လွှင့်သူအများအပြားတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ given မှပေးခဲ့သည်။ ဤပုံရိပ်များနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရခြင်းသည်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုတွင်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်စေနိုင်သည်” (စ။ ၁၇၇) ။ နောက်ဆက်တွဲအလုပ်များတွင်စာရေးသူများသည် Self-objectification မေးခွန်းလွှာ (SOQ) (Noll & Fredrickson၊ 1998) နှင့်နှစ်ဆယ်ဖော်ပြချက်စမ်းသပ်ခြင်း (Fredrickson et al မှတဆင့်ပြည်နယ် Self-objectification ၏။ , 1998).
အဲဒီနှစျခုသုတေသနအဖွဲ့များလွတ်လပ်စွာအချင်းချင်း၏အလုပ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း, သူတို့သည်ဖန်တီးသီအိုရီအမြင်များနှင့်အစီအမံကဒီလယ်ကိုမြေကူညီပေးခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့များ objectification ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦး objectified ခန္ဓာကိုယ်သတိရှိခြင်းအဖြစ်သို့မဟုတ် Self-objectification (SO) အဖြစ်လူသိများသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ဤရှုထောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အမြိုးသမီးမြားကိုဦးဆောငျမညျဖွစျကွောငျးငြင်းခုန်။ ဒါဟာတစ်ဦး objectifying ယဉ်ကျေးမှု၌နထေိုငျသူမြားအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ပြင်ပစရိုက်များ (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကိုကြည့်ဘယ်လောက်) ကထက်သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းစရိုက်များ (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ခံစားရပုံကို) (Aubrey ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ရိပ်မိနှင့်တန်ဖိုးထားတတ်ရန်သင်ယူယုံကြည်နေသည် 2010) ။ ၎င်းတို့သည်လေ့ကျင့်ခန်းခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းတို့တွင်မကြာခဏပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ဤသုတေသီများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်များစွာအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၅ နှစ်ကြာသုတေသနပြုမှုကဤသီအိုရီများကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသော SO နှင့် OBC နှစ်မျိုးလုံးသည်စနစ်တကျမစားသောအစားအစာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာအားမလေးစားမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုပြသသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အတွက်၊ Moradi & Huang, 2008 တွင်ကြည့်ပါ) ။
သစ်တစ်ခုသီအိုရီမူဘောင်နှင့်အသစ်တိုင်းတာမှုများနှင့်အတူလက်နက်ပါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အပေါ်သုတေသနပြု 1997 ကတည်းကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့သည်။ အများစုမှာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း OBC အမျိုးသမီးတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လောက် SO နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏အကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ လိင်ကမီဒီယာအသေးစားနံပါတ်များကို (ဥပမာ Aubrey အတွက်ဆက်လက် objectifying မှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှု၏ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ 2006a; ရပ်ကွက်, 2002) ဒါပေမယ့်၏ 2007 လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်အဆကြီးပြင်း မိန်းကလေးများများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ယား Task Force ၏အစီရင်ခံစာ (ယား, 2007) ။ ဤအစီရင်ခံစာလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယင်း၏အလားအလာအကျိုးဆက်များအတွက်မိန်းကလေးတွေကို၏တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ပြီးသောယားကတာဝန်ပေးခဲ့သည်။ task ကိုအင်အားသုံးဤပြဿနာအပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားဆန်းစစ်နှင့်စုစည်းတင်ပြရန်နှင့်အတူတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်လက်ရှိပင်ကိုယ်မူလလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်သက်သေအထောက်အထားနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အကျိုးဆက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်မျိုးစုံသက်ဆိုင်သူများများအတွက်အကြံပြုချက်များပူဇော်ကြ၏။
အဆိုပါယား Task Force ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့တန်ဖိုးကအခြားအသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ဖယ်ရန်, သူသို့မဟုတ်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူခံသို့မဟုတ်အပြုအမူကနေမှသာကြွလာသောအခါ "ဖြစ်ပေါ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ထက်ကျယ်ပြန့်နှင့်သတ်မှတ်ထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုမြင်သုံးသပ်ကြ; OR ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး sexy ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု (ကျဉ်းမြောင်းသတ်မှတ်) နှိုင်းယှဉ်ထားသည်တဲ့စံမှကျင်းပနိုင်ခြင်း, OR ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိင် objectified-ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အခြားသူများ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်အရာသို့ လုပ်. , သို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာတငျထား ( "ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်သို့ယားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်,2007, p ။ 1) ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ, မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုကဲ့သို့သောအဝတ်အစားများနှင့်ကလေးကစားစရာအဖြစ်ထုတ်ကုန်, မီဒီယာအကြောင်းအရာ၌၎င်း, လူ့ interaction ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ကျယ်ပြန့်ယဉ်ကျေးမှုသဘာဝအဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြခဲ့သည်။
ဤအကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်များစွာကိုမေးခွန်းများကိုလာကြပြီနဲ့အတူလယ်ပြင်သေးအပြည့်အဝကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသေးပေ။ ထမြောက်တော်မူသော့ချက်မေးခွန်းများကိုတစ်ခုမှာဒီဖြစ်ပါသည်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-objectification ကဲ့သို့တူညီသောလား? မတူကွဲပြားသောသုတေသနအဖွဲ့များ objectification သီအိုရီနှင့်ယား Task Force အစီရင်ခံစာအားဖြင့်ကြီးပြင်းလာသည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှစ်ဦးစလုံး၏ဝုဏ်အတွင်းစမ်းသပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည့်အတိုင်း, ကွဲပြားခြားနားသောစည်းကမ်းများကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသော့ချက်အသုံးအနှုန်းများသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ လူမှုရေးစိတ်ပညာအတွင်းမှာပဲဥပမာ, ဟော်လန်နှင့် Haslam (2013) အသွင်အပြင်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံကနေ object တစ်ခုမှအလားတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြည့်ရှုဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်, တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ကိုလူ့စေသောအရည်အသွေးများကိုငြင်းပယ်ဖို့အထိကြောင်း objectification ပါဝငျအရာကို diverging Conceptual ရှိပါတယ်သည်ဟုမှတ်ချက်ချကြပါသည်။ မကြာမီကဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ဤဝေါဟာရနှစ်ခုကိုအတူတူမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ; Self-objectification ယခင်ကထုတ်စာလုံးပေါင်းအဖြစ်လေးပုံစံများကိုတစ်ဦးယူနိုငျသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏တစ်ဦးတည်းသာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးမှုများတာ objectification သီအိုရီနှစ်ခုစလုံး objectification ပေါ်တွင်အလုပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုအဓိကသီအိုရီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေမဝင်စေခြင်းငှါ နှင့် လိင်မှုကိစ္စ။ ထို့အပြင်၎င်း၏ကန ဦး သီအိုရီ (Fredrickson & Roberts သည်, 1997), objectification လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification (Murnen & Smolak, 2013) ။ သို့သော်ဝေါဟာရနှစ်ခုကိုပြီလို့တော့မဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Self-objectification လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထင်ရှားစေခြင်းငှါအရာအတွက်တစ်ဦးတည်းသာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းသောဒြပ်စင်အပေါငျးတို့သသွင်ပြင်လက္ခဏာများရန်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, ငါမသည်အဘယ်အရာပေါ်တွင်အချို့ရှင်းလင်းပြတ်သားထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည် မဟုတ် လိင်သို့မဟုတ်လိင်ကဲ့သို့တူညီသော။ ဒါဟာ sexism ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အခြားသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သာရှုမြင်ရသောအမျိုးသမီးများတန်ဖိုးနှင့်တန်ဖိုးများ၏ကျဉ်းမြောင်းသောဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်၌အဘယ်သူမျှမအပြန်အလှန်ရှိပါသည်။ လူတစ် ဦး သည်အခြားတစ် ဦး ၏အခြားလိုအပ်ရာများ၊ အကျိုးစီးပွားများသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများကိုမထည့်ဘဲအခြားသူအားမိမိ၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန်“ အသုံးပြုသည်” (Murnen & Smolak, 2013) ။ အမြိုးသမီးမြား၏ကိုယ်ပိုင်အပျြောအပါးများနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်။ ဒါ့အပြင်မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification လေ့လာနေဖြစ်ပါသည် မဟုတ် မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများလေ့လာနေကဲ့သို့တူညီသော။ မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (ဥပမာ, ပုံပြင်လိုင်းများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် လိင်နှင့်စီးတီး or Will & ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ထက်ကျယ်ပြန့်သည်နှင့်ပိုးပန်း၏ပုံဖော်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးကို, လိင်၏ဆွေးနွေးမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုအပါအဝင် themes များတဲ့အရေအတွက်, လွှမ်းခြုံ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်းဆိုလိုပါဘူး အားလုံးမီဒီယာပြဿနာဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ်လိင်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပေါ်ထွက်လာလျှင်ထိုသို့သောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ, sexism ပြဿနာကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မီဒီယာအကြောင်းအရာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Objectification ၏ပျံ့နှံ့: တစ်ဦးကလျှပ်တစ်ပြက်
ဤဖြစ်စဉ်၏အလေးချိန်ကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ပျံ့နှံ့မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရမည်။ မီဒီယာသုံးစွဲသူများသည်အမျိုးသမီးများ၏ရုပ်ပုံများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်မှုနှင့်မည်မျှထိတွေ့ခံနေရသနည်း။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရအမေရိကန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ရုပ်မြင်သံကြားကိုလေးနာရီကြာကြည့်ရှုပြီး ၈ နာရီနီးပါးသည်မီဒီယာကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲကြသည် (Rideout, Foehr, & Roberts, 2010) ။ ဒီကိန်းဂဏန်းများသည်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများ၊ အသက် ၁၈ မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းမီဒီယာကိုတစ်နေ့လျှင် ၁၂ နာရီသုံးစွဲရန်သတင်းပို့ကြသည် (Coyne, Padilla-Walker, & Howard,) 2013) ။ ဤမီဒီယာ၏ထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ဆိုင်ရာအရလိင်အရလိင်အရလိင်အရလိင်အရလိင်မှုဆိုင်ရာအရလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြသောရုပ်ပုံများကို ၀ န်ကြီးချုပ်ရုပ်မြင်သံကြားမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင် ၄၅.၅% တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည် (Smith, Choueiti, Prescott, & Pieper, 2012) နှင့်အဖြစ်မှန်အစီအစဉ်များတွင်အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်အမျိုးသမီး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (Flynn, Park, Morin, & Stana, 2015) ။ လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများအရအမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်အားဖြင့်ကိုးကားချက်များသည်အမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့ခြင်းအစီအစဉ်များတွင်တစ်နာရီလျှင် ၅.၉ ကြိမ်ဖြစ်သည် (Ferris, Smith, Greenberg, & Smith, 2007) ။ အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်တေးဂီတဗီဒီယိုများတွင်လည်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်လိုက်လျောညီထွေစွာဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းထက် ပို၍ တသမတ်တည်းကျလေ့ရှိသည် (Aubrey & Frisby, 2011; Turner, 2011; Wallis ဟာ, 2011; ရပ်ကွက်, Rivadeneyra, သောမတ်စ်, နေ့, & Epstein, 2012) ။ အမှန်မှာ၊ အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များ၏ဗွီဒီယို ၇၁% တွင်အနည်းဆုံးလိင်ဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းများအနက်အနည်းဆုံးလေးခုပါရှိသည် (Frisby & Aubrey, 2012).
အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ၏လိင် objectifying ပုံဖော်ခြင်းအမျိုးသမီးတွေ featuring တီဗီကြော်ငြာ (Messineo ၏ 22% ထဲမှာပေါ်လာကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူကိုလည်းကြော်ငြာ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါသည် 2008) ။ တွေ့ရှိချက်များအရတီဗွီကြော်ငြာများတွင်အမျိုးသမီးများသည်သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြသပြီးအမျိုးသားများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဤပုံစံကိုစပိန်ဘာသာပရိုဂရမ်များ (Fullerton & Kendrick,2000အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမေရိကန်ကြော်ငြာများမှာ (Ganahl, Kim, & Baker, 2003), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတူရကီ, ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ဂျပန် (Arima အဖြစ်ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံတွေအတွက်, 2003; Ibroscheva, 2007; နယ်လ်ဆင် & ပက်ခ်, 2008; Uray & Burnaz, 2003) ။ ဥပမာ၊ ဖိလစ်ပိုင်မှကြော်ငြာ ၂၅၄ ခုကိုလေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများ (၅၂.၇%) ထက်ပိုမိုများပြားသည် (၆.၆%) သည် (Prieler & Centeno၊2013) ။ ဤသရုပ်ဖော်ပုံများကိုဘီယာကြော်ငြာများတွင်မကြာခဏတွေ့ရသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်လေ့လာခဲ့သောဘီယာနှင့် nonbeer ကြော်ငြာများ၏ ၇၅% နှင့် nonbeer ကြော်ငြာများ၏ ၅၀% သည်လိင်အရိပ်အမြော်အမြင်ရှိသူများဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများသည်အကန့်အသတ် ရှိ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည် (Rouner, Slater, & Domenech-Rodriguez, 2003).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်အရန့်ကွက်နေသောအမျိုးသမီးများအတွက်ရုပ်ပုံများသည်ရုပ်မြင်သံကြားပြင်ပရှိမဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကဲ့သို့အခြားမီဒီယာများသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများအရမဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာ ၅၁.၈% သည်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများအဖြစ်ဖော်ပြသည် (Stankiewicz & Rosselli, 2008), နှင့်ဤပုံဖော်ခြင်းယောက်ျား၏မဂ္ဂဇင်းများ (ကြော်ငြာများ၏ 75.98%), အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းများ (ကြော်ငြာများ၏ 55.7%) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်မိန်းကလေးများမဂ္ဂဇင်းများ (ကြော်ငြာများ၏ 64.15%) တွင်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်းတွေ့ရှိချက်များကမိန်းကလေးများမဂ္ဂဇင်းများတွင်မိန်းကလေးများပိုမိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း (Graff, Murnen, & Krause, 2013), အပေါ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမော်ဒယ် Rolling Stone အဖုံးများ (Hatton & Trautner, 2011) နှင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းများတွင်ပုံဖော်ခံထားရသောအမျိုးသားများ (Farquhar & Wasylkiw, 2007; ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, Olivardia, Borowiecki & Cohane, 2001) ။ ဗွီဒီယိုဂိမ်းတွင်မိန်းမအရေအတွက်များများမပါသော်လည်း၊ အမျိုးသမီးများပေါ်လာသောအခါသူတို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအသွင်အပြင်ရှိသည်။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုဂိမ်းမဂ္ဂဇင်းတွေမှာတွေ့ရတယ် (Dill & Thill, 2007; Miller & နွေရာသီ, 2007), ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖုံးများပေါ်တွင် (Burgess, Stermer, & Burgess, 2007) နှင့်အမှန်တကယ်ဂိမ်းကစားစဉ် (ဥပမာ - Beasley & Collins Standley) 2002; ဒေါင်းစမစ်၊ 2010) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖုံးများဟာသူတို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် Burgess et al ။ (2007) လူ့ဇာတ်ကောင်သာ 21% မှာအမျိုးသမီးများပေါ်ထွန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအမျိုးသမီးများ, 42.3% ကိုယ်ထိလက်ရောက် (ထိုယောက်ျား၏ 5.8% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) objectified ဖြစ်. , 49% "busty" သို့မဟုတ်အဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ကြ "စူပါ busty ။ "
ဒါဟာအကျဉ်းချုပ်မီဒီယာရှုခင်းတစ်ခုလျှပ်တစ်ပြက်ပေးထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ၏ Objectifying ပုံဖော်ခြင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာများ၏ဘုံအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ကြပြီးမျိုးစုံမီဒီယာကို formats အနှံ့ပေါ်လာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတီဗီအစီအစဉ်များကဲ့သို့အချို့ကို formats ၌များစွာသောမိန်းမပြသနှင့် objectification ရုံတစျခုကိုလောင်နိုင်ပါတယ်သောပုံဖော်ခြင်းသည်နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုဂိမ်းအဖြစ်အခြားမီဒီယာကို formats ၌အနည်းငယ်သောမိန်းမတို့သည်ဤအလတ်စားလောင်တဲ့သူလူငယ်သာဒီကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ထိတွေ့ပါလိမ့်မည်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွါးသောပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ Fredrickson နှင့်ရောဘတ် (အဖြစ်1997) အမြိုးသမီးမြား၏ဤစိတ်ကူး၏တန်ခိုးသည်၎င်း၏မဆုတ်မနစ်စေခြင်းငှါ, အကြံပြုသည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်၏ကျန်အပိုင်းများအတွက်ငါ objectifying မီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှု၏ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာရုံစိုက်ပါ။ ဤသုံးသပ်ချက်အတွက်ဆောင်းပါးများကိုစုစည်းရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောလေ့လာမှုများနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုများကို ၁၉၉၅ မှ ၂၀၁၅ အထိအချိန်ဇယားကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့သည်။ PsycINFO, Communication and Mass Media Complete, PubMed နှင့် Google Scholar တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ၄ ခုကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ။ အောက်ပါအဓိကရှာဖွေရေးစကားလုံးတွဲသုံးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ “ မီဒီယာနှင့်အရာ ၀ တ္ထု *၊ ”“ မီဒီယာနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း” နှင့်“ မီဒီယာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထု * ။ ” ရုပ်မြင်သံကြား၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ တေးဂီတဗီဒီယိုများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ကြော်ငြာများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုအောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများကို“ မီဒီယာ” တွင်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ရှိပြီးသားဆောင်းပါးများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ရှာဖွေခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ဆောင်းပါးများစွာသည်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ (အထူးသဖြင့် Cato & Carpentier) ၏ ဦး စားပေးမှုများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများကိုစစ်ဆေးသည်။ 2010), ငါစမ်းသပ်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်မှုနည်းလမ်းများမှတဆင့်မီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ကြောင်းလေ့လာမှုများကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဤအကြောင်းအရာကို objectifying မှသင်တန်းသားများကိုထိတွေ့ကြောင်းလေ့လာမှုများပါဝင်သည်; ပုံမှန်နှင့် Self-objectification ပေါ် objectifying နှစ်ဦးစလုံးနေ့တိုင်းမီဒီယာအသုံးပြုမှုကြောင့်စမ်းသပ်ပြီးသက်ရောက်မှု, ဒါမှမဟုတ် objectifying အဖြစ် coded မီဒီယာမှနေ့စဉ်ထိတွေ့မှုမျိုးစုံကိုရလဒ်များမှပံ့ပိုးမှုများစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, မီဒီယာထိတွေ့မှုအစိတ်အပိုင်းလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ ငါသာသည်အခြားရလဒ်များကိုမှ Self-objectification ပံ့ပိုးမှုများကိုသာစမ်းသပ်ပြီးကြောင်းဆောင်းပါးတွေမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်အမှန်တကယ်မီဒီယာထိတွေ့မှုတိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲမီဒီယာစံနမူနာ၏ International စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
လယ်ပြင်၌ရှိသောကြှနျုပျအပြန်လည်သုံးသပ် 109 လေ့လာမှုများပါရှိသောကြောင့် 135 မြေားကိုလြှော့။ အတွက်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း ပုံ 1ဤလေ့လာမှုများ 1995 ထံမှ 2015 မှအပြည့်အဝအချိန်ဘောင်သရုပ်ဆောင်။ သို့သော်လေ့လာမှုများ၏အမြောက်အများ (113 ၏ 135, ဒါမှမဟုတ် 84%) 2008 ထုတ်ဝေသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, အများ၏ 2007 လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်ခဲ့ကြသည် ယား Task Force အစီရင်ခံစာ။ ကြှနျတေျာ့သံသယဒီယားအစီရင်ခံစာဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်အထူးသ, ကိစ္စမှ, ယေဘုယျ၌၎င်း, လက်ရှိအလုပ်အတွက်ကန့်သတ်ဖို့အာရုံကိုဆွဲကကူညီပေးခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ 135 လေ့လာမှုများလူမှုရေးစိတ်ပညာ, ဆက်သွယ်ရေး, အမျိုးသမီးရဲ့လေ့လာမှုများ, လူမှုဗေဒ, အများပြည်သူကျန်းမာရေး, neuroscience နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာအပါအဝင်မျိုးစုံစည်းကမ်း, ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အမှန်စင်စစ် (ထိုကိုးကားအတွက်ခရေပွင့အားဖြင့်မှတ်သား) ကို 109 စာပမြေားဤကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားမှုကျယ်ပြန့်ကြောင်းညွှန်ပြ, 40 ကွဲပြားခြားနားသောဂျာနယ်များထက် သာ. ထင်ရှား၏။
ပုံ ၁။ အချိန်နှင့်အမျှလေ့လာမှု ၁၃၅ ခုဖြန့်ဝေခြင်း။
PowerPoint ဆလိုက်မူရင်း JPG (55.00KB)အပြည့်အဝအရွယ်အစားဖော်ပြရန်
ဒီထက်မတူကွဲပြားမှု, သို့သော်, အလုပ်နည်းစနစ်အမျိုးအစားများတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 135 လေ့လာမှုများ၏, 98 (72.6%) ကိုမကြာခဏ objectifying နှင့် nonobjectifying, တိကျတဲ့မီဒီယာအကြောင်းအရာသင်တန်းသားများကိုထိတွေ့ကြောင်းစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများခဲ့ကြသည်။ သူကတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းချုပ်ထားနှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ချက်များခွင့်ပြုထားသောကွောငျ့, အနည်းငယ်မျှသာပြင်ပတရားဝင်မှုကိုမကြာခဏလည်းမရှိ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချဉ်းကပ်နည်းအကျိုးရှိပေမယ့် မီဒီယာလှုံ့ဆော်မှုမကြာခဏနေဆဲမီဒီယာအကြောင်းအရာဟာအလွန်ကန့်သတ်ရှုထောင့်ဖြစ်သောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြည့်ရှုအားပေးပုံရိပ်တွေဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်မီဒီယာဥပမာသုတေသနပညာရှင်များကရှေးခယျြထားကြသည်ထို့ကြောင့်သေချာပေါက်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကြည့်ရှုရန်ရှေးခယျြမယ်လို့အကြောင်းအရာပြန်ပါလာမည်မဟုတ်။ ကျန်ရှိနေသေးသောလေ့လာမှုများအောက်ပါနည်းလမ်းဖြိုဖျက်: 28 (20.7%) လက်ရှိသဘောထားတွေ, ယုံကြည်မှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များမှနေ့စဉ်မီဒီယာထိတွေ့ပံ့ပိုးမှုများကိုသာစမ်းသပ်ပြီးကြောင်း Cross-Section, ဆက်စပ်လေ့လာမှုများကြ၏5(3.7%) လေ့လာမှုများနောက်ပိုင်းတွင်သဘောထား, ယုံကြည်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များပုံမှန်မီဒီယာထိတွေ့ပံ့ပိုးမှုများကိုသာဆန်းစစ်ကြောင်း longitudinal ဆက်စပ်လေ့လာမှုများကြ၏ ဆက်စပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲနှစ်ဦးစလုံးအကဲဖြတ်ပေါင်းစပ်နှင့်4(3.0%) လေ့လာမှုများ။
မီဒီယာ၏အဘယျအမျိုးအစားများသည်ဤစမ်းသပ်မှုအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသလဲ အဆိုပါ 135 လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီး, 68 လေ့လာမှုများ (50.4%) ထိုကဲ့သို့သောမဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်နေဆဲအမြင်အာရုံပုံများ, အာရုံစိုက်; 22 လေ့လာမှုများ (16.3%) ထိုကဲ့သို့သောတီဗီဗီဒီယိုအပိုင်းများကို, ကြော်ငြာ, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်အဖြစ်, ဗီဒီယိုမီဒီယာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ (7.4%) ဂီတမီဒီယာ, အဓိကအားဖြင့်ဂီတဗီဒီယိုတွေကိုအာရုံစိုက်။ က Eleven လေ့လာမှုများ (8.2%) ဗီဒီယိုဂိမ်းသို့မဟုတ် virtual reality အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 24 လေ့လာမှုများ (17.8%) ကိုမကြာခဏတီဗီထိတွေ့မှု, မဂ္ဂဇင်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဂီတဗီဒီယိုအသုံးပြုမှုအချို့ကိုပုံစံအကဲဖြတ်ဤအမျိုးအစားကိုဖြတ်ပြီးမျိုးစုံမီဒီယာမှာကြည့်ရှုကြ၏။
ဤလေ့လာမှုများအတွင်းနမူနာများ၏စည်းကမ်းချက်များအရမိတ်ကပ်သည်ပုံမှန်စိတ်ပညာလေ့လာမှုကိုကိုယ်စားပြုပြီး၎င်းသည်အဖြူ၊ အနောက်တိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာတတ်သောဘွဲ့ကြိုဘာသာရပ်ရေကန်များပေါ်တွင်များစွာမှီခိုသည် (Henrich, Heine, & Norenzayan,2010) ။ ဤအ 137 လေ့လာမှုများအတွင်း 135 နမူနာ (နှစ်ခုလေ့လာမှုများမြင့်မားသောကျောင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားနမူနာနှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ပြီး) ရှိခဲ့သည်။ ဤအပါဝင်သူများ၏ဖော်ပြချက်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် စားပွဲတင် 1။ ပါဝင်သူအသက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သင်တန်းသားများကိုအများစုအတော်လေးတန်းတူမြီးကောင်ပေါက်များ၏နံပါတ်များကို (များသောအားဖြင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်) နှင့်လူကြီးများနှင့်အတူတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများဖြစ်ကြသည်။ သာငါးလေ့လာမှုတွေကလေးတွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင်စိတ်ပညာသုတေသန (Henrich et al များအတွက် (ဆိုလိုသည်မှာ, ပညာတတ်အနောက်တိုင်း, စက်မှုထွန်းကားကြွယ်ဝသော, နှင့်ဒီမိုကရေစီ) ကိုလိုက်တယ်တံဆိပ်သင့်လျော်။ , 2010), တွေ့ရှိချက်များကိုတဦးတည်းအများဆုံး (88 လေ့လာမှုများ, သို့မဟုတ် 64%) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေလာမယ့်အတူအနောက်တိုင်းလူအမျိုးမျိုးထံမှအစပြုအားလုံးလေ့လာမှုများပြုလုပ်ပေမယ်ဖော်ပြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် 88 နမူနာအတွင်းကိုးဒါပေမဲ့အားလုံးအများစုအဖြူရောင်နမူနာ (55% White ကထက် ပို. ) ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကိုးဦးကွဲပြားခြားနားနမူနာအထင်ကြီးခဲ့ကြပေမယ့်ပြိုင်ပွဲခဲသောဤလေ့လာမှုများအတွင်းယူဆချက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်, သုတေသနကောက်ယူခဲ့သည်ရှိရာဒေသများ (ဥပမာတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား) ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ကြပေမည်။ ထိုအကိုးတစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှု (Gordon ကမြင်ပါတယ်, 2008) တစ်ဦးတသားတည်းတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနမူနာကြည့်ရှု။ ထို့ကြောင့်ဤမြေကွက်၌တွေ့ရှိချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အဖြူရောင်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများများ၏အတွေ့အကြုံများအပေါ်အကြီးအကျယ်အခြေခံထားတယ်။
ဇယား ၁။ မီဒီယာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း ၁၃၅ ခုအတွင်းနမူနာ ၁၃၇ ခု၏နမူနာ
CSV ဖိုင်PDF ဖိုင်ရယူရန်display ဇယား
လိင် Objectifying မီဒီယာမှ Exposure ပြည်သူ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်ပါကဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား?
ဒီinရိယာထဲမှာအထင်ရှားဆုံးသောနယ်ပယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်းဟာမီဒီယာပါ ၀ င်မှုကလူတွေနဲ့သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်ပုံအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိ၊ လေ့လာခဲ့သောရလဒ်တစ်ခုမှာ Self-objectification ဖြစ်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် SOQ မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်းသို့မဟုတ် Objectified Body Consciousness Scale (McKinley & Hyde, 1996) ။ ဤတွင်, ဗဟိုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီဖြစ်ပါသည်: လိင်အမျိုးသမီးတွေရိပ်မိသို့မဟုတ်ပြုမူဆက်ဆံသူတို့ကိုယ်သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုအဖြစ်နှင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ attribute တွေကျော်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့အမျိုးသမီးငယ်ဦးဆောင်လမ်းပြ objectifies ကြောင်းမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့ပါသလား ငါတိကျတဲ့မီဒီယာအမျိုးအစားများဖို့ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၌၎င်း, SO မိန်းမတကာတို့ထက်မြင့်မားသောအဖြစ်ဖော်ထုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုနေ့စဉ်မီဒီယာထိတွေ့မှုများအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု, စမ်းသပ်ပြီးကြောင်း 16 လေ့လာမှုများကိုထုတ်လေ၏။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများအတွင်းရလဒ်တသမတ်တည်းအားကောင်းတဲ့မရှိကြပေ။ တချို့ကဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိင်တီဗီအကြောင်းအရာ objectifying မှမကြာခဏထိတွေ့မှု SO ပိုမိုမြင့်မားဉာဉျဆိုး (Aubrey, ဆက်စပ်ကြောင်းကိုရှာဖွေခဲ့ကြ2006a; Vandenbosch၊ Muise, Eggermont, & Impett, 2015-two လေ့လာမှုများ) နှင့်ပိုမိုမြင့်မား Self-စောင့်ကြည့် (Aubrey, 2007; ဂရေ့ & Hyde, 2009) ။ အခြားသူများကလိင်တစ်ဦးစုစုပေါင်းတီဗီအစီအစဉ်များအတိုင်းအရှည်, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အခြားမီဒီယာ (Aubrey မှတဆင့်မီဒီယာ objectifying များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များကိုတွေ့ 2006b; Nowatzki & Morry, 2009) သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အခြားအစီအမံများပါ ၀ င်သည့်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများအားကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်း (Ward, Seabrook, Manago, & Reed, 2016) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများအပြားလေ့လာမှုများမိုးသည်းထန်စွာမဂ္ဂဇင်းထိတွေ့မှုနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့ SO (Aubrey အကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် 2007; Fardouly, Diedrich, Vartanian, & Halliwell, 2015; Morry & Staska, 2001; Slater & Tiggemann, 2015; Vandenbosch & Eggermont, 2012, 2015; Zurbriggen, Ramsey, & Jaworski, 2011) ။ objectification သီအိုရီဤပုံစံများအားလုံးထောက်ခံမှုကိုမျှော်လင့်ချက်များ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အများအပြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ အဘယ်သူမျှမ လိင်တီဗီအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ခြုံငုံတီဗီအကြောင်းအရာနှင့်စောင့်ကြည့် (Aubrey, objectifying မှထိတွေ့မှုများအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များ 2006b Slater & Tiggemann, 2015; Tiggemann & Slater, 2015) သို့မဟုတ် SO ဉာဉျဆိုး (Aubrey,2007; Slater & Tiggemann, 2015; Vandenbosch & Eggermont, 2012) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အခြားသူများကိုလိင်မဂ္ဂဇင်း objectifying ဖို့ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်း (Aubrey မှထိတွေ့မှုမရှိသိသာပံ့ပိုးမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ 2006a; Tiggemann & Slater, 2015မဂ္ဂဇင်းနှင့်တီဗွီထုတ်လွှင့်မှုပေါင်းစပ်ဖော်ပြခြင်း (ကင်၊ Seo၊ & Baek၊ ) 2013), သို့မဟုတ်စုစုပေါင်း objectifying မီဒီယာထိတွေ့မှု (Zurbriggen et al ၏။ , 2011).
ဤရွေ့ကားအတန်ငယ်ရောထွေးဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိချက် 18 လေ့လာမှု (ထုတ်ဝေ 16) မှပိုမိုအားကောင်းစမ်းသပ်ဒေတာအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာထိတွေ့ငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectifying လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectifying မှတင်ပြခဲ့သည်ကြားနေသို့မဟုတ်ဘက်မလိုက်မီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ကျောင်းသားများထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြောင်း Self- ကန့်ကွက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် ( ဥပမာ Aubrey & Gerding၊ 2014; Choma, Foster, & Radford, 2007; Daniels, 2009; Ford၊ Woodzicka၊ Petit၊ Richardson နှင့် Lappi၊ 2015; Halliwell, Malson, & Tischner, 2011; Harper & Tiggemann, 2008; တရားမဝင်သောရလဒ်များကိုအဘို့, Aubrey တွေ့မြင်, 2010; Pennell & Behm-Morawitz၊ 2015) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ထိတွေ့မှုမြင့်မားသောအမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္sixာန်ခြောက်ခုကိုကြည့်ရှုသောဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီးများသည်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာမပါသောရုပ်ပုံများကိုမြင်သောအမျိုးသမီးများထက်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အပြုသဘောဆောင်သောဖော်ပြချက်များနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အပြုသဘောဆောင်သောဖော်ပြချက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည် (Aubrey, Henson, Hopper, & စမစ်, 2009) ။ နှစ်ခုလေ့လာမှုများ Fox က, Ralston, Cooper ကများနှင့်ဂျုံးစ် (တလွှား2014) ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပွားကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ nonsexualized ကိုယ်ပွားထိန်းချုပ်ခဲ့ဘူးထက်ဘွဲ့ကြိုမိန်းမတကာတို့ထက် SO သာ. ကြီးဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမော်ဒယ်များသို့မဟုတ်အားကစားသမား၏ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်အမျိုးသမီးငယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြရန်ဖို့တောင်းစွမ်းဆောင်ရည်အားကစားသမားများ၏ဓါတ်ပုံများကိုမြင်ဘူးသောမိန်းမတို့သည်ထက်သူတို့ရဲ့အလှအပနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုက်နည်းပါးလာအသုံးအနှုန်းများအာရုံစိုက်ပိုပြီးအသုံးအနှုန်းများကိုသုံး (ဒံယေလ, 2009; Smith က 2015) ။ အလယ်အလတ်ရှိသောအချက်များကဤသက်ရောက်မှုများသည်အားနည်းနေခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အခြေအနေများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်ဟုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်မှတ်သားဖွယ်ပါ ၀ င်သည့်ပြိုင်ပွဲဝင်ပါဝင်သူများနှင့်အားကစားအမျိုးအစားများပါဝင်သည် (Harrison & Fredrickson, 2003), မီဒီယာအကြောင်းအရာကြည့်ရှုစဉ်လေ့ကျင့်ခန်း status ကို (Prichard & Tiggemann, 2012) နှင့်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအကြားသုံးလပတ်, အသက်, နှင့်ယခင်ကိုယ်ဝန် (Hopper & Aubrey, 2011).
ထို့အပြင်ဤလေ့လာမှုအများစုသည် objectification သီအိုရီ (Fredrickson & Roberts,) ၏အောက်ခြေတွင်အမျိုးသမီးများအားစစ်ဆေးခဲ့သည်။1997), ယောက်ျားရဲ့မီဒီယာထိတွေ့မှုလည်း၎င်းတို့၏ Self-objectification (Aubrey နှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထားရှိ၏ 2006a; Aubrey, 2007; Aubrey & တေလာ, 2009; Dakanalis et al ။ , 2012; Vandenbosch & Eggermont, 2015; Zurbriggen et al ။ , 2011) နှင့် Self-sexual (ရပ်ကွက် et al ။ , 2016) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Aubrey (2006aအချိန် ၁ တွင်တီဗွီကိုလိင်ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့်အမျိုးသားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်တစ်နှစ်အကြာတွင်လက္ခဏာအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်ပိုမိုများပြားလာသည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်သောမဂ္ဂဇင်းများနှင့်တီဗီအစီအစဉ်များသည်အမျိုးသားများ၏ကိုယ်ခန္ဓာစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ မတူညီသောရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များနှင့်မဂ္ဂဇင်း ၁၆ ခုနှင့်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခု၏တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံ (SEM) လေ့လာမှုတွင်လိင်ကွဲလိင်ကွဲသူများနှင့်လိင်တူချစ်သူအရွယ်ရောက်အမျိုးသားများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပိုမိုပြုလုပ်နိုင်သည် (Dakanalis et al ။ , 2012) ။ သို့သော်လူငယ်များအနေဖြင့်ကြံ့ခိုင်ရေးမဂ္ဂဇင်းများကိုပုံမှန်ထိတွေ့ခြင်း (Morry & Staska, 2001), မဂ္ဂဇင်းပုံရိပ်တွေ objectifying မှစမ်းသပ်ထိတွေ့မှု (Michael, Parent, & Moradi, 2013) နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏တေးဂီတဗီဒီယိုလိုင်းများ၊ လူမဂ္ဂဇင်းများသို့မဟုတ်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုပုံမှန်ထိတွေ့ခြင်း (Vandenbosch & Eggermont, 2013သူတို့ရဲ့ Self-objectification ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ပျက်ကွက်) တစ် ဦး ချင်းစီ။ လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်သောအမျိုးသားများ၏မီဒီယာဖော်ပြမှုများသည်ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ (ဥပမာ - Hatton & Trautner)၊ 2011), လူတို့တွင်ထိုအဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်စမ်းသပ်ပါဝင်ပတ်သက်ဒိုင်းနမစ်ရှင်းလင်းကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လိင်မှုကိစ္စအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုသည်ကြည့်ရှုသူများ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အသွင်အပြင်အပေါ်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေမည့်အလားအလာဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်မီဒီယာ၏ပါးလွှာသောစံနမူနာနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ကြွက်သားဆိုင်ရာစံနမူနာများကိုခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုအဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့်အတူစားသုံးရန်ပုံပျက်နေသောချဉ်းကပ်ပုံကိုထင်ဟပ်စေသောယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများ (meta-analytic ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊ , & Saucier, 2008; Grabe, ရပ်ကွက် & Hyde, 2008; Groesz, Levine, & Murnen, 2002; Holmstrom, 2004) ။ လိင်ကမီဒီယာတူညီသောအသင်းအဖွဲ့များလိုက်လျော objectifying ထိတွေ့စျနိုငျသလဲ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုလိင် objectifying မီဒီယာမှကြည့်ရှု '' ထိတွေ့မှုနှင့်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုအကြားတိုက်ရိုက်လင့်များစမ်းသပ်ပြီးကြောင်းလေ့လာမှုများအပေါ်အာရုံစိုက်။
ထို့ကြောင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာကန့်ကွက်သည့်ရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခံရသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်သူများသည်ဤပုံများနှင့်မထိတွေ့ခဲ့သူများထက်ခန္ဓာကိုယ်၏စိုးရိမ်မှုများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာမကျေနပ်မှုများကိုဖော်ပြသည်ဆိုသောသိသာထင်ရှားသည့်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများရှိသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ရပ်ကွက်ရှိလူကြီးများကိုစမ်းသပ်သည့်လေ့လာမှုများအကြားတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ သြစတြေးလျနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံများရှိနိုင်ငံများစွာမှနမူနာများတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မဂ္ဂဇင်းပုံရိပ်များအပါအ ၀ င်မီဒီယာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးတွင်လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် (Dens, De Pelsmacker, & Janssens, 2009; Farquhar & Wasylkiw, 2007; Halliwell et al ။ , 2011; Harper & Tiggemann, 2008; Krawczyk & Thompson က, 2015; Lavine et al ။ , 1999; Mulgrew & Hennes, 2015; Mulgrew, Johnson, Lane & Katsikitis, 2013; Smith က 2015; ဒါပေမယ့် Johnson, McCreary & Mills ကိုကြည့်ပါ။ 2007; Michael, Parent, & Moradi, 2013; တရားမဝင်သောဘွဲ့ကြိုလူတို့တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ), မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးများ (Aubrey များအတွက် 2010); တေးဂီတဗီဒီယိုများ (ဘဲလ်၊ လောတန်၊ ဒစ်တမာ၊ 2007; Mischner, van Schie, Wigboldus, van Baaren, & Engels, 2013; Prichard & Tiggemann, 2012), ရုပ်ရှင် clips (Pennel & Behm-Morawitz, 2015), ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ (Strahan et al ။ , 2008) နှင့် virtual world မှပုံများ (Overstreet, Quinn, & Marsh, 2015) ။ ဥပမာအားဖြင့်, လိင် objectifying တီဗီကြော်ငြာထိတွေ့ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်, အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုနှင့်လူပေါင်း (Strahan et al မရှိဘဲကြော်ငြာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူအမျိုးသမီးတွေထက်သူတို့ထဲကအခြားသူတွေ '' သညာတွေနဲ့ပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ်ပိုပြီး၎င်းတို့၏ Self-လေးစားမှုအခွခေံကဖော်ပြခဲ့သည်။ , 2008) ။ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏စမ်းသပ်ဘဲလ် et al ။ (2007) ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုသုံးလိင် objectifying သီချင်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုပြီးနောက်, ဒါပေမယ့်မဗီဒီယိုများကနေသီချင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးသို့မဟုတ်စကားလုံးများ၏စာရင်းကိုလေ့လာနေပြီးနောက်တိုးမြှင့်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများလိင်ထိုကဲ့သို့သောနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်မီဒီယာ, objectifying ပုံမှန်စားသုံးမှုအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ ဤအစံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသောခုနစ်ပါးသောဆောင်းပါးများအနက်တွေ့ရှိချက်အတန်ငယ်ရောထွေးနှင့်မကြာခဏခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Gordon ကမြင်ပါတယ် (2008) တဦးတည်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးတီဗီဇာတ်ကောင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခြင်းပိုမိုအရေးပါမှု attributing ဟောကိန်းထုတ်လျော့နည်း objectifying ဂီတအနုပညာရှင်နှင့်အတူအနက်ရောင်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအကြားပိုမိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Aubrey (2007) တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအကြားတွင်, မဂ္ဂဇင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှထိတွေ့မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification မြင့်မား rated, တွေ့ရှိခဲ့ အသီးအသီး သာ. ကြီးသောခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ပိုမိုအသွင်အပြင်စိုးရိမ်စိတ်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်သည့်ဆုတ်ယုတ်ညီမျှခြင်းထည့်သွင်းခဲ့သည်တစ်ချိန်ကသို့သော်ဤတရားလေးပါးအသင်းအဖွဲ့များ၏တဦးတည်းပေမယ့်အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အခြားလေ့လာမှုများအဘို့အတွေ့ရှိချက်ခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်အသွင်အပြင်အပေါ် objectifying မီဒီယာကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုစိုးရိမ်ပူပန်မှု / စိုးရိမ်ပူပန်မှုအားလုံးမှာထွန်းသစ်စမရ (Aubrey နှင့်အတူပိုမိုသမများမှာ 2006b Aubrey & တေလာ, 2009; Dakanalis et al ။ , 2012), သို့မဟုတ်အခြား variable တွေကိုနောက်ဆုံးမော်ဒယ်သို့မဟုတ်ညီမျှခြင်း (Kim က et al အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြတခါ nonsignificant ဖြစ်လာ။ , 2013; Slater & Tiggemann, 2015) ။ သည်အခြားလေ့လာမှုများများစွာမီဒီယာ၏စမ်းသပ်ခြင်းသက်ရောက်မှုပါးလွှာစံပြဂီတဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းများ၏မကြာခဏစားသုံးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အတွက်အလွန်မြင့်မားဖြစ်လူသိများအမျိုးအစားများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ကြပြီအထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဒီ link မတည်ရှိပါဘူးဆိုပါစို့ရန်ခက်ခဲသည် ပိုမိုမြင့်မားသောခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှု (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Grabe et al ကြည့်ပါ။ , 2008) ။ ထိုကွောငျ့, ဤမေးခွန်းကိုထပ်မံလေ့လာမှုမီဒီယာတစ်ခုအကွာအဝေးစမ်းသပ်မျက်ခြေမပြတ်နှင့်လိင်မီဒီယာစားသုံးမှု objectifying ပိုပြီးတိုက်ရိုက်တွက်ချက်မှုနှင့်အတူနေသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများကိုအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသီအိုရီမှအဆိုပြုထားသောနောက်ဆုံးအကျိုးဆက်သည်လိင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မျှော်လင့်ချက်အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ပုံရိပ်များသည်အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာအရာများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများအဖြစ်ရှုမြင်ရန်အားပေးပြီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလျော့နည်းစေသည်။ 1997; McKinley & Hyde 1996) ။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်ဒီ Two-ခြေလှမ်းမော်ဒယ်စုံစမ်းပြီ, ဒါမှမဟုတ်လိင်မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ objectifying မှထိတွေ့မှုများအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုစုံစမ်းပြီ။ စမ်းသပ်ခြင်း 384 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ, Aubrey (2007) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အတွက်မြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောမီဒီယာမှမကြာခဏထိတွေ့ခြင်းလိင်စဉ်အတွင်း သာ. ကွီးမွတျကိုယျခန်ဓာ-image ကို Self-ဝိညာဏ်ခန့်မှန်းပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Tolman ကင်မ်, Schooler နှင့် Sorsoli (2007), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပါအဝင်ဣတ္ပိုးပန်းမဟာဗျူဟာများ, မီးမောင်းထိုးပြကြောင်းတီဗီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ပုံမှန်ထိတွေ့မှုတွေ့ရှိခဲ့ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပေမယ့်ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက Vandenbosch နှင့် Eggermont (2015) မဂ္ဂဇင်း sexualizing မှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု, ယဉ်ကျေးမှုအသွင်အပြင်စံနမူနာသူတို့ရဲ့ International, အရည်အချင်းကိုကျော်အသွင်အပြင်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုး (SO သူတို့ရဲ့အတိုင်းအတာ), သူတို့ရဲ့ Self-စောင့်ကြည့်ခြင်း, သုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမှာသူတို့ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကြားအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆက်သွယ်မှုလုပ်ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုသုံးခု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအဘို့ဤနှစ်ခု-Step မော်ဒယ်၏ရှုထောင့်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ အထူးသ, မီဒီယာထိတွေ့ sexualizing အလှည့်အတွက်ပြင်သစ်နမ်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုခန့်မှန်းသောအသွင်အပြင် variable တွေကို, ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
objectification သီအိုရီ objectifying အကြောင်းအရာအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်စေသင့်ကြောင်းစောဒကတက်သော်လည်း, ယောက်ျားလည်းထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာတွေ့ရှိချက်များအမြိုးသမီးမြား၏လိင် objectifying ပုံရိပ်တွေထိတွေ့သူတို့ရဲ့နှင့်အတူလူပျိုတို့ရဲ့ feeling ကိုပိုပြီးအဆင်မပြေချိတ်ဆက်ကြောင်းညွှန်ပြ ပိုင်ဆိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းကိုလေးစားခြင်း (Aubrey & Taylor၊ 2009; တွင်း et al ။ , 2009; ဂျွန်ဆင် et al ။ , 2007; Lavine et al ။ , 1999) ။ ဒုတိယအနေဖြင့်အကြောင်းအရာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်ပိုးပန်းခြင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူတို့၏အမြင်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဓမ္မဓိifying္ဌာန်ကျသောတီဗွီကြော်ငြာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည်ရက်စွဲတစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းတွင်ပါးနပ်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၏အရေးပါမှုအဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (Hargreaves & Tiggemann, 2003) ။ (ရပ်ကွက်, Vandenbosch နှင့် Eggermont longitudinal ဒေတာအသုံးပြုခြင်း2015) ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို '' မဂ္ဂဇင်း sexualizing ထိတွေ့သူတို့မိန်းကလေးတွေဖို့တာဝန်အရေးပါမှုကိုတိုးမြှင့် '' ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အလှည့်မှာတော့မိန်းကလေးကဒီ objectification အသွင်အပြင်အပေါ်အဓိကထားကြောင်းပိုးပန်းမဟာဗျူဟာ၏ယောက်ျားလေးများ '' လက်ခံမှုဖြစ်ပေါ်အောင်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ objectifying မီဒီယာမှထိတွေ့မှုကသူတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများ '' ကိုယ်ပိုင် interaction ကပုံဖော်ပြသလျက်ရှိသည်။ Aubrey နှင့်တေလာ (2009) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ၏မဂ္ဂဇင်းပုံရိပ်တွေထိတွေ့ဘွဲ့ကြိုတို့သညျဤထိတွေ့မှုမပါဘဲလုပ်ခဲ့တယ်ယောက်ျားထက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရင်ခုန်စရာစွမ်းရည်အတွက်လျော့နည်းယုံကြည်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Aubrey နှင့်တေလာအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့ဖြစ်ကောင်းသူတို့အောင်မြင်စွာပုံကဲ့သို့အမျိုးသမီးတွေကိုလိုက်ရန်လုံလောက်သောဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ priming အသုံးပြုပုံမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသွင်အပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတို့သညျစိုးရိမျပါစေဟန်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ Zurbriggen et al ။ (2011) rလိင်ကမီဒီယာ (တီဗီ, ရုပ်ရှင်, မဂ္ဂဇင်း) objectifying ၏ယောက်ျားရဲ့မကြာခဏစားသုံးမှုပင် Self-objectification များအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်, သူ့ဟာသူကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည့်၎င်းတို့၏ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များ၏ သာ. ကြီးမြတ် objectification နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ eported ။ ဒီဧရိယာ၌သုတေသနနေဆဲထွန်းသစ်စသျောလညျးဤတွေ့ရှိချက်က objectified မိန်းမတို့အားထိတွေ့ခြင်းအမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာဆက်ဆံရေး၏ယောက်ျားရဲ့အမြင်များကိုသာသက်ရောက်ပုံကိုနောက်ထပ်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြသည်။
လိင် Objectifying မီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့ကျနော်တို့အမျိုးသမီးများနေ့ရိပ်မိဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား?
objectification သီအိုရီနှင့် objectified ကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဏ်၏အယူအဆ၏လွှမ်းမိုးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectifying Self- သဘောထားအမြင်, တနည်းအားဖြင့် Self- objectification, ကိုယ်ခန္ဓာကျေနပ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု၏လေ့လာဆန်းစစ်ကျဉ်းမြောင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရအမျိုးသမီးများ၏လိင်ဆိုင်ရာပုံများနှင့်ထိတွေ့မှုကသိမြင်မှုအားမည်သို့ရရှိကြသည်ကိုသုတေသီများကစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ (ဤချဉ်းကပ်မှု၏အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက် Loughnan & Pacilli ကိုကြည့်ပါ။ ) 2014) ။ ဤတွင်မေးခွန်းကဒီဖြစ်ပါသည်: အရာဝတ္ထုသိဒါမှမဟုတ်လူသားမြားသညျသိများတွင်အသုံးပြုကြသည်ဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်အသုံးပြုကြသည်ကြောင်းဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်ရိပ်မိတစ်ဦးချင်းစီ objectified ပါသလား? ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်, သုတေသီများ (မတိုက်ဆိုင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပြသမှသာအပိုငျးပိုငျးမှာပြထားတဲ့ဥပမာ inverted,) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှစ်ဦးစလုံးအချို့လမ်းများတွင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသူလိင် objectified နှင့် nonobjectified တစ်ဦးချင်းစီ၏ပုံရိပ်များနှင့်ထိတွေ့နေကြရသောစမ်းသပ် Paradigm သုံးပါ, ပြီးတော့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်ရန် သင်တန်းသားများကို '' သညာနှင့်ဤပုံရိပ်တွေရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့။ အတော်ကြာလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသက်သေအထောက်အထားငါတို့သည်အဘယ်သို့သိမြင်ရိပ်မိနှင့်အမျိုးသမီး၏ဖြစ်စဉ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကို process ဘယ်လောက်ထက်တ္ထုကို process ကိုဘယ်လိုပိုမို aligns သော။ ညွှန်ပြ
အထူးသဖြင့်အရာဝတ္ထုများကဲ့သို့လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်သောအမျိုးသမီးများသည်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်၊ သို့မှသာပါဝင်သူများသည်သတ်မှတ်ထားသော ဦး ခေါင်းနှင့်အလောင်းများကိုကိုက်ညီခြင်းတွင်မှတ်ဉာဏ်အမှားအယွင်းများပိုမိုပြုလုပ်နိုင်သည် (Gervais, Vescio, & Allen,2011); အရာဝတ္ထုများကဲ့သို့သောလိင်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများသည်အညီအမျှဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းတန်းနေပြီး (inverted) ဖြစ်သည် (Bernard, Gervais, Allen, Campomizzi, & Klein, 2012; Bernard, Gervais, Allen, Delmee, & Klein, 2015); နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို၎င်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ အထီးကျန်စွာတင်ပြသောအခါအရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည် (Gervais, Vescio, Förster, Maass, & Suitner, 2012) ။ ထို့အပြင်၊ သွယ်ဝိုက်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအလုပ်များကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများအရလူတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာလိင်အင်္ဂါအလွှာများကိုလူသားများနှင့်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာထင်ဟပ်စေသောအသုံးအနှုန်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုနည်းပါးကြောင်းပြသသည် (ဥပမာ - Puvia & Vaes, 2013) ။ Vaes, Paladino နှင့် Puvia (2011), ဥပမာ (သင်တန်းသားများကို objectified နှင့် nonobjectified အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသောအခါ, objectified အမျိုးသမီးတွေလူ့-related စကားနှင့်လျော့နည်းအလွယ်တကူဆက်စပ်ခဲ့တစ်ခုတည်းသောသူတွေကိုဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြ ယဉ်ကျေးမှု, ခြေလျင်) တိရိစ္ဆာန်စကားများ (ဥပမာ, အတူထက် သီး၌, ဖော) ။ အလားတူပင် Cikara, Eberhardt နှင့် Fiske (2010) nonsexualized မိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကပိုပြီးအလွယ်တကူရန်လိုသော sexism ၏အဆင့်မြင့်ပြသသူကိုလူပျိုတို့, အရာဝတ္ထု, မလုပ်ဆောင်ချက်၏အေးဂျင့်များဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးတွေကိုဆက်စပ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ယေဘုယျအား, ကသညျလူသားတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားသည့်အခါအမျိုးသမီးများလိင် objectified ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုပုံမှန်အားပါဝင်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုသက်ဝင်ပါဘူးပုံနှင့်အစားကိုပုံမှန်အားဖြင့်အရာဝတ္ထု (Schooler ဟာအဘို့သိုထားသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များမြှင့်လုပ်ဆောင် 2015).
ဤတွေ့ရှိချက်များအရသုတေသီများသည်လိင်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများသည်လူသားဆန်မှုမရှိခြင်း (သို့) လူမဆန်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်စတင်ခဲ့သည်။ သက်သေအထောက်အထားများအရအမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးအလောင်းများကိုအမျိုးသမီးများ၏နွေးထွေးမှုနှင့်အရည်အချင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အခြေအနေတွင်တင်ပြသည့်အခါ (ဥပမာ - ပိုမို၍ လူသားဆန်ဆန်) ကဲ့သို့သောပိုမိုသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုဖော်ပြသည် (Bernard, Loughnan, Marchal, Godart, & Klein, 2015); sexualized အမျိုးသမီးပုံရိပ်များသည်အထီးလိင်ဆိုင်ရာပုံများ (Schmidt & Kistemaker, ကဲ့သို့) ပိုမိုအချိုးကျသောအခါ 2015); သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုလက်ခံသောမိန်းမများသူတို့အာဏာရှိသည့်အချိန်များကိုမှတ်မိရန်ခဲယဉ်းသည် (Civile & Obhi, 2015) ။ လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်သောအမျိုးသမီးများသည်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအကြားလိင်မှုဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်သောအခါလူမဆန်သော (သို့) တိရစ္ဆာန်အသုံးအနှုန်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်သတ်မှတ်ခံထားရသောအမျိုးသမီးများနှင့်ပိုမိုနီးစပ်မှုရှိကြောင်းအစီရင်ခံသောအခါ၊ အထူးသဖြင့်ယောက်ျားများကိုဆွဲဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည့်အမျိုးသမီးများ၊ သို့မဟုတ် Self-objectification အပေါ်မြင့်မားတဲ့သူအမျိုးသမီးများအကြား (Puvia & Vaes, 2013; Vaes et al ။ , 2011) ။ အတူတူ, လေ့လာမှုများ၏ဤအုပ်စုသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေလုပ်ငန်းများ၌, ဤကွဲပြားခြားနားမှုတသမတ်တည်းလျော့နည်းလူ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြိုးသမီးမြားဘောင်ဘယ်လို nonsexualized ပုံရိပ်တွေကနေကွဲပြားဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာသိမြင်မှုလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။
Objectified ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ရို attribute
သိမြင်မှုအားအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောတစ် ဦး ချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုသည့်အပြင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်များနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အထောက်အထားရှိပါသလား။ ထပ်မံ၍ လူမှုရေးနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာမှစမ်းသပ်သောစံနမူနာများကို အသုံးပြု၍ သုတေသီများသည် sexualized သို့မဟုတ် objectified နည်းလမ်းများဖြင့်ပုံဖော်ထားသူများကိုညံ့ဖျင်းစွာရိပ်မိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သာမန်သို့မဟုတ်သာမန်ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံများတွင်ဖော်ပြခံရသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြသခံရသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအလေးထားသည့်နည်းများဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသည့်အမျိုးသမီးများသည်အခြားသူများမှအရည်အချင်း၊ ထောက်လှမ်းရေး (Glick, Larsen, Johnson, & Branstiter, 2005; Loughnan et al ။ , 2010; Rudman & Borgida, 1995; Wookey, ချိုင်း & ဘတ္, 2009) ။ ဒီနိယာမ၏အတိုင်းအတာတစ်ခုလိမ္မာပါးနပ်သရုပ်ပြခုနှစ်, Schooler (2015) အစွမ်းထက်နှင့်အရည်အချင်းတက္ကသိုလ်သမ္မတအကြောင်းသတင်းစာပုံပြင်နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုပေးအပ်သည်။ အခြို့သောသင်တန်းသားများကိုဤပုံပြင်ကိုနောက်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြိုးသမီးတ featuring အနေနဲ့ကြော်ငြာမှပေးအပ်သဖြင့်, အခြားသူတွေအဘို့, ကလာမယ့်တစ်ဦးကြားနေကြော်ငြာဖို့နေရာချပေးခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်သည်အခြားအခြေအနေများ (Schooler အတွက်ယောက်ျားလုပ်ခဲ့တယ်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြော်ငြာနှင့်အတူတွဲဆောင်းပါးကြည့်ရှုအားပေးသူကိုယောက်ျား (သို့သော်မပေးအမျိုးသမီးတွေ) ကိုတက္ကသိုလ်သမ္မတအဖြစ်မှလျော့နည်းအရည်အချင်းကိုစွပ်စွဲကြောင်းညွှန်ပြ 2015) ။ ထို့အပြင်သက်သေအထောက်အထားများအရသူသို့မဟုတ်သူမ၏အလုပ်ကိုကလစ်များကြည့်နေစဉ်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအာရုံစိုက်မည့်အစားမီဒီယာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အသွင်အပြင်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကအမျိုးသမီး (သို့သော်အထီးမဟုတ်) ပစ်မှတ်များကိုနွေးထွေးသော၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အရည်အချင်းမရှိဟုသတ်မှတ်သည် (Heflick, Goldenberg) , Cooper, & Puvia,2011) ။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးအလုပ်အကိုင်နှင့် status အများ၏အမျိုးသမီးပစ်မှတ်ကိုဖြတ်ပြီးပုံတူကူးယူ။ ဒါဟာသူတို့အရိုးရှင်းစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနေသောထိုကဲ့သို့သော athleticism သို့မဟုတ်သင်္ချာကျွမ်းကျင်မှု, သဘောထားအမြင်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ခအဖြစ်တစ်ဦးအရည်အချင်းကိုနှင့်အတူ featured သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမော်ဒယ်များ, အဘို့, ကိစ္စကိုဖြစ်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားဘာမျှအဖြစ်ရှုမြင်ခံရပုံရသည်။ အမှန်စင်စစ်ဂျွန်ဆင်နှင့် Gurung (2011), သူတို့လိုခငျြသောအရာကိုရဖို့ကသူတို့အလောင်းတွေကိုအသုံးပွုဖို့ပိုများပါတယ်, အရည်အချင်းအဖြစ်ပြသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမော်ဒယ်များမှနှိုင်းယှဉ်အတွက်ရိုးရှင်းစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိနသောသူမော်ဒယ်များကိုပိုမိုကရာအဖြစ်ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီး rated ခဲ့တဲ့ကာလတိုစိုကျပရှိသည်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ , (ထိုထက်နည်း, စိတ်ပိုင်းဖြတ်လွတ်လပ်သော, အသိဉာဏ်, တာဝန်ရှိသည်, studious နှင့်ပါရမီ) လျော့နည်းနိုင်စွမ်းလျော့နည်းရိုးသား, လျော့နည်းယုံကြည်စိတ်ချပိုမိုကျန်းမာ / လျော့နည်းမထိုက်မတန်, ဣတ္နှင့်ထို့ထက် ပို. ရေတိမ်ပိုင်း။
ဤပုံစံများနှင့်ယူဆချက်များသည်ကလေးများနှင့်အားကစားသမားများကဲ့သို့သောအထူးလူ ဦး ရေများသို့လည်းပျံ့နှံ့သည်။ သာမန်ကလေးများကဲ့သို့သောအဝတ်အစားများတွင်တွေ့ရသောမိန်းကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှင်းလင်းစွာလိင်ဆက်ဆံသောအဝတ်အစားများပါ ၀ င်သည့်မိန်းကလေးများ (ဥပမာ၊ အလွန်တိုတောင်းသောစားဆင်ယင်၊ ကျားသစ်ပုံနှိပ်သည့်ဆွယ်တာအင်္ကျီ၊ ပိုက်ဆံအိတ်) ကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှပညာတတ်၊ အရည်အချင်း၊ အရည်အချင်းမရှိ၊ နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်း (Graff, Murnen, & Smolak, 2012), နှင့်လျော့နည်းအေးဂျင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့်လျော့နည်းကိုယ်ကျင့်တရား status ကိုစွပ်စွဲနေကြသည် (Holland & Haslam, 2015) ။ ကလေးများသည်လိင်မှုကိစ္စပြုထားသောမိန်းကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုယူဆချက်အချို့ကိုပြုလုပ်ပြီး၎င်းတို့ကို ပို၍ လူကြိုက်များသော်လည်းအားကစား၊ စမတ်ကျ။ ကောင်းမွန်သောအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုပြသခဲ့သည် (Stone, Brown, & Jewell, 2015; ဒါပေမယ့်အခြားရွေးချယ်စရာတွေ့ရှိချက်များအတွက် Starr & ဖာဂူဆန်ကိုကြည့်ပါ, 2012) ။ အားကစားဝတ်စုံများသို့မဟုတ်လိင်အင်္ကျီနှင့် pose များတွင်တင်သည့်အခါအမျိုးသမီးအားကစားသမားများကိုမည်သို့ရိပ်မိကြောင်းလေ့လာမှုများကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရလိင်အပျော်အပါးအားကစားသမားများအားမကြာခဏဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၊ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ လိင်မှုကိစ္စမရှိသောအမျိုးသမီးအားကစားသမားများထက်များသောအားဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရလေ့ရှိသော်လည်းလိင်အားကစားသမားများသည်အားကစားစွမ်းရည်နည်းပြီးဥာဏ်ရည်နိမ့်ကျခြင်း၊ - ရိုသေလေးစားမှု (Gurung & Chrouser, 2007; Harrison & Secarea, 2010; Nezlek, Krohn, Wilson, & Maruskin, 2015) ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲကနေနှင့်ပုံဟာအားကစားသမားအကြောင်းကိုတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအနေဖြင့်ဖွင့်မှတ်ချက်တွေစွမ်းဆောင်ရည်အားကစားသမားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားသမား (ဒံယေလပြုခြင်းထက်မိမိတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, သူတို့ရဲ့အားကစားပြင်းထန်မှု, သူတို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုမော်ဒယ် status ကိုအကြောင်းပိုမိုမှတ်ချက်များဆွဲကြောင်းညွှန်ပြ 2009, 2012; Daniels & Wartena, 2011) ။ ပြောင်းပြန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားသမားစွမ်းဆောင်ရည်အားကစားသမားလုပ်ပေးထက်သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်, အလှအပနှင့် sexy အကြောင်းကိုပိုမိုမှတ်ချက်များဆွဲပါ။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းအားကစားသမားတင်ဆက်ထားပါတယ်ကွာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကနေအာရုံကိုဆွဲယူနှင့်သူတို့၏အလောင်းများကို၏အသွင်အပြင်အပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအလေးပေးပုံရသည်။
သတ်မှတ်ခံထားရသောအမျိုးသမီးများ၏အရည်အချင်းများသည်၎င်းတို့၏အရည်အချင်းထက် ကျော်လွန်၍ ယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ရုပ်ပုံများကိုလူပုဂ္ဂိုလ်နည်းပါးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ (စိတ်ခံစားမှုများ၊ အတွေးများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ) ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်များဟုမှတ်ယူထားပြီးစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးပြီးကိုယ်ကျင့်တရားအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသည်ဟုရှုမြင်ကြသည် (Bongiorno, Bain, & Haslam, 2013; ဟော်လန် & Haslam, 2013; Loughnan, Pina, Vasquez, & Puvia, 2013; သို့သော်ဤဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏အခြားရှုထောင့်အတွက် Grey, Knobe, Sheskin, Bloom, & Barrett ကိုကြည့်ပါ။ 2011) ။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းလေ့လာမှု (Loughnan et al အတွက်။ ,2010) ဘွဲ့ကြိုများကနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသူမဟုတ်သူတစ် ဦး ၏ပုံလေးပုံ၊ အမျိုးသမီးနှစ် ဦး၊ အမျိုးသားနှစ်ယောက်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင် (၂)၊ ကြားနေသောပစ်မှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိကျမှန်ကန်သောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိမ့်ကျသည့်ခံစားချက်များ၊ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုအရအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့အားအပြည့်အ ၀ ဝတ်ဆင်ထားသည့်ပုံရိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်မှုဆိုင်ရာပုံဖော်ခံရသည့်အတွေးများ (အကြောင်းပြချက်၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု) နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ (ဆန္ဒများ၊ အစီအစဉ်များ) နည်းပါးသည်ဟုယုံကြည်ရသည် (Loughnan & Pacilli, 2014).
ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အမြင်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုစမ်းသပ်လေ့လာမှု၏တတိယအစုတွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectifying ပုံရိပ်များထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများကန့်ကွက်ကြောင်းအယူအဆနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ သက်သေအထောက်အထားအချို့သည်ဆက်စပ်နေသောအချက်အလက်များမှဖြစ်ပြီး၊ တိကျသောမီဒီယာအမျိုးအစားများကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုပါ ၀ င်သည့်မီဒီယာအသုံးပြုခြင်း (ဥပမာမီဒီယာဇာတ်ကောင်များဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း) သည်အမျိုးသမီးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖော်ပြသောအယူအဆများအားပိုမိုအားကောင်းစေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။ အဓိကတန်ဖိုးမှာသူတို့၏အသွင်အပြင် (Eggermont, Beullens, & Van Den Bulck)၊2005; Gordon ကမြင်ပါတယ်, 2008; Hust & လဲ့, 2008; ရပ်ကွက်, 2002; ရပ်ကွက်နှင့်ဖရီဒ်မန်း 2006; ရပ်ကွက် et al ။ , 2015) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ရပ်ကွက် et al ။ (2015လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းမဂ္ဂဇင်းများကိုမှန်မှန်စားသုံးသောဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည်ခြောက်လကြာပြီးနောက်အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ အယူအဆများကိုကန့်ကွက်ကြောင်းထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂေါ်ဒွန် (2008) က Black ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအကြား, objectifying ဂီတအနုပညာရှင်နှင့်အတူအားကောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းအမျိုးသမီးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအယူအဆပိုမိုထောက်ခံမှုခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့; အပြန်အလှန်နည်း objectifying အနုပညာရှင်နှင့်အတူဖော်ထုတ်ဒီအယူအဆ၏လျော့နည်းထောက်ခံမှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာတွင် Swami et al (ယေဘုယျအားဖြင့် သာ. ကျပ်တည်းသောမီဒီယာထိတွေ့အခြားသူများကိုပိုမို objectification နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ , 2010; Zurbriggen et al ။ , 2011) ။ အခြားမီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနည်းတူ၊ ဤလင့်ခ်များသည်တူညီသောခိုင်မာမှုမရှိပါ၊ အချို့သောတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်အမျိုးအစားဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြထားသည် (Peter & Valkenburg, 2007; ter Bogt, Engels, Bogers, & Kloosterman, 2010).
ဆက်စပ်မှုအချက်အလက်များ၏ဤအစုကိုပံ့ပိုးသောစမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များမှတွေ့ရှိချက်များမှာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းသားများသည်တီဗီကလစ်များသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားသောအမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည့်မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများမှနောက်ပိုင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များ (သို့) ရိုးရာကျားပုံစံပုံစံများကိုဒီထိတွေ့မှုမရှိဘဲကျောင်းသားများထက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ထောက်ခံမှုပေးခဲ့သည်။ , 2009; Kistler & Lee က 2009; Lanis & Covell, 1995; MacKay & Covell 1997; Pennel & Behm-Morawitz၊ 2015; Rollero, 2013; Schooler, 2015; ရပ်ကွက်,2002; ရပ်ကွက်နှင့်ဖရီဒ်မန်း 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Kistler နှင့် Lee က (2009) ငါးအလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသီချင်းဗီဒီယိုများထိတွေ့တို့သညျဤထိတွေ့မှုမပါဘဲယောက်ျားထက်မိန်းမနှင့်ရိုးရာကျားသဘောထားတွေ၏ objectification ပိုပြီးထောက်ခံမှုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့; အမြိုးသမီးမြားရဲ့သဘောထားတွေထိခိုက်နစ်နာကြဘူး။ တစ်ဦးထက်ပိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုလမ်း, Behm-Morawitz နှင့် Mastro (၌ဤအယူအဆ supporting2009မိနစ် ၃၀ ကြာလိင်စိတ်ခံယူသောအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုကစားခဲ့သည့်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းထက်အမျိုးသမီးများ၏သိမြင်မှုစွမ်းရည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ (အမျိုးသမီးကျောင်းသူကျောင်းသားများ) အပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောသဘောထားများရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဖန်တီးမှုချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအရေအတွက်ကအလုပ်သမား, သုတေသီများကိုလည်းကျားမအခန်းကဏ္ဍအပေါ်မီဒီယာ sexualizing ဤစမ်းသပ်သက်ရောက်မှုလိင်အရအခွင့်အရေးအပြုအမူမှတိုးချဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ Ford ကား, Boxer, အမ်းစထရောင်းနှင့် Edel (2008အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာဟာသဗီဒီယိုများ (အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများနှင့်လက်အောက်ခံအိမ်ရှင်မများကဲ့သို့သောဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သောအခန်းကဏ္pedများနှင့်ပုံပျက်သောအခန်းကဏ္) များတွင်ပါ ၀ င်သော) ဗီဒီယိုများနှင့်ကြားနေဟာသကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုနောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများအပါအ ၀ င်ကျောင်းဝင်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအတွက်ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တောက်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ လိင်အရဟာသနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည့်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းများအတွက်လျှော့ချဖြတ်တောက်မှုရာခိုင်နှုန်းကိုအမျိုးသားများကြားနေဟာသနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ရသည်။ ယင်းသည်အထူးသဖြင့်ရန်လိုသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်အမျိုးသားများအတွက်မှန်ကန်သည်။ အခြားသူများကမူအမျိုးသမီးများအတွက်အလုပ်လျှောက်ထားသူကိုလူတွေ့မေးမြန်းရန်လူတို့တောင်းဆိုသည့်အခြေအနေများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤတွင်ယောက်ျားများသည်လိင်အရလိင်အရဆက်ဆံမှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖော်ထုတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို ပိုမို၍ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားဤထိတွေ့မှုမရှိပဲအမျိုးသားများထက်အရည်အချင်းနိမ့်သည်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် (Hitlan, Pryor, Hesson-McInnis & Olson, 2009) ။ ဒီအမျိုးအစားအစောဆုံးလေ့လာမှုများတ Rudman နှင့် Borgida (1995) လိင်အရအခွင့်အရေးနှင့် objectifying ကြော်ငြာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူအထီးကျောင်းသားများအမျိုးသမီးလျှောက်ထားသူပိုမိုလိင်အရအခွင့်အရေးမေးခွန်းများကိုမေးသော်နှင့်သူမ၏နောက်ခံအကြောင်းကိုသူမ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်များနှင့်လျော့နည်းအကြောင်းပိုမိုပြန်ပြောပြကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးပွညျကိုအမှီနှင့်လွတ်လပ်သောအကဲခတ်များကနှစ်ဦးစလုံးထက်ပိုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဤ "Prime" လူများ၏အမူအကျင့်ရိပ်မိ၏။ ထို့ကြောင့်ဤဒေတာအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုသော schema ၏ယာယီရစေတယ်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အပြုအမူအမျိုးသမီးကျောင်းသားများကိုဆီသို့နှင့်အမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းတရားများဆီသို့အထီးတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ '' ဆွဲဆောင်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးကဖော်ပြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေသဘောသဘာဝပေးထား, ထွန်းသစ်စတစျခုအရေးပါသညျ့မေးခှနျးမီဒီယာအကြောင်းအရာ objectifying မှထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေဆီသို့အကြမ်းဖက်မှုများပိုမိုထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားကယန္တယားတချို့အကြောင်းအရာ objectifying ထိတွေ့သူတို့ကိုဆီသို့အကြမ်းဖက်မှုများ၏လက်ခံမှုကိုတိုးပွားစေတော်မူသော, အမျိုးသမီးများ dehumanizes နှင့်အခြားသူများကိုဤအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုများ၏လက်ခံမှုတိုးပွါးသောပုလ်စံချိန်စံညွှန်း primes ကြောင်းငြင်းခုံကြောင်းငြင်းခုံနှင့်အတူ, ဒီကွန်နက်ရှင်တည်ရှိစေခြင်းငှါ, ဘာကြောင့်အဆိုပြုထားပြီ အမြိုးသမီးမြားအပျေါအကွမျးဖကျ။ စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားမီဒီယာ objectifying ထိတွေ့သူတွေထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများတိုးပွားလာသည်းခံစိတ်ရှာဖွေတာ, အထွေထွေရဝုဏ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ကြတယ်။ , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်: ကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာတွေ, ဒါမှမဟုတ်ဂီတဗီဒီယိုများမှလိင် objectified မိန်းမနှင့်အပြန်အလှန်တဲ့သူတော်တော်များများလေ့လာမှုများ, သင်တန်းသားများကိုအများစုတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ, ကိုဖြတ်ပြီး, နောက်ပိုင်းမှာဒီထိတွေ့မှုမပါဘဲသင်တန်းသားများကိုထက်အောက်ပါတို့မှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပိုသည်းခံစိတ်ကိုကမ်းလှမ်း မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ, ကလေးလိင်အလွဲသုံးစားမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်လူ့အကြမ်းဖက်မှုများ (Aubrey, Hopper, & Mbure,2011; Beck, ယောက်ျားလေးများ, နှင်းဆီ, & Beck, 2012; ဇီယာစေ့, ဘရောင်း, & Collins က, 2008; Fox & Bailenson, 2009; Fox က et al ။ , 2014; Galdi, Maass, & Cadinu, 2014; Kistler & Lee က 2009; Lanis & Covell, 1995; Machia & သိုးသငယ်, 2009; MacKay & Covell 1997; Milburn, Mather, Conrad, 2000; Romero-Sanchez, Toro-Garcia, Horvath & Megias, 2015; Yao, Mahood, & Linz, 2009; ဒါပေမယ့် Null ရလဒ်တွေအတွက်တော့ Sprankle, End, & Bretz ကိုကြည့်ပါ။ 2012; Vance, Sutter, Perrin, & Heesacker, 2015) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Aubrey et al ။ (2011) လိင်ကသီချင်းဗီဒီယိုများ objectifying ထိတွေ့ဘွဲ့ကြိုယောက်ျားလူ့အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ဤထိတွေ့မှုမပါဘဲယောက်ျားထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဘို့လျော့နည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုပိုမိုလက်ခံမှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းအစီရင်ခံ; မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီလက်ခံမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမထိခိုက်ခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူကောက်ယူအနည်းငယ်လေ့လာမှုများတ Driesmans, Vandenbosch နှင့် Eggermont (ခုနှစ်တွင်2015) တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်အတူဗီဒီယိုဂိမ်းကစားရန်တာဝန်ကျခဲ့တဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံဆယ်ကျော်သက်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး nonsexualized ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အတူတူဂိမ်းကစားသူကိုဆယ်ကျော်သက်ထက်မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ပိုသည်းခံစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တွေ့ရှိချက်များအရအမျိုးသမီးများ၏လိင်ဆိုင်ရာပုံများနှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုကန့်ကွက်သူများသည်အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူများအပေါ်အပြစ်တင်ခြင်းနှင့်တာ ၀ န်ယူခြင်းနှင့်စာနာမှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုပေးသည်ဟုဖော်ပြသည် (Burgess & Burpo, 2012; Loughnan et al ။ , 2013; Milburn et al ။ , 2000) ။ ဤသက်ရောက်မှုများသည်အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရသည့်ကလေးသူငယ်များကိုသက်ရောက်ကြောင်းပြသထားသည် (Holland & Haslam, 2015) နှင့်တိကျသောနည်းလမ်းများမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တကယ်အပြုအမူ, ရန်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှု, Galdi et al ၌တည်၏။ (2014လိင်အရနှောင့်ယှက်မှုဆိုသည်မှာလိင်မှုဆိုင်ရာ / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြက်ရယ်ပြုမှုများကိုအမျိုးသမီးစကားဝိုင်းမိတ်ဖက်သို့ရွေးချယ်ရန်နှင့်ပေးပို့ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်အမျိုးသားများသည်ဤအကြောင်းအရာနှင့်မသက်ဆိုင်သောအမျိုးသားများထက်ကျား၊ အလားတူပင်၊ virtual world တွင်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုလေ့ရှိသောသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှု၊ နာမည်ခေါ်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောမှတ်ချက်များကိုပိုမိုအတွေ့အကြုံများစွာတင်ပြခဲ့ကြသည် (Behm-Morawitz & Schipper, 2015).
ပါဝင်သူကျား, မဒီကြီးထွားလာစာပေအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍကိုကစားခဲ့သည်။ objectifying မီဒီယာပေမယ့်ထိတွေ့မှုအချို့လေ့လာမှုများအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအပေါ်တူညီသောသက်ရောက်မှု (ဥပမာ Driesmans et al ရှိခဲ့ပါတယ်။ , 2015; MacKay & Covell 1997), တခြားလေ့လာမှုတွေအတွက်ဆိုးကျိုးများ Beck et al (မိန်းမတို့အဘို့ယောက်ျားနှင့်မအဘို့ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ , 2012; ဇီယာစေ့ et al ။ , 2008; Kistler & Lee က 2009; Lanis & Covell, 1995; Milburn et al ။ , 2000) ။ အမှန်စင်စစ်အချို့လေ့လာမှုများအတွက်အချို့ရလဒ်ကို variable တွေကိုအဘို့, တစ်ထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက်အမျိုးသမီးတွေဖော်ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, ဖြစ်ပွားခဲ့သည် အနိမ့် ထိန်းချုပ်မှုပုံများနှင့်ထိတွေ့ခံရသောအမျိုးသမီးများထက်အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ခံသဘောထားများ (Burgess & Burpo, 2012; ဇီယာစေ့ et al ။ , 2008; Lanis & Covell, 1995) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အမြိုးသမီးမြားအပျေါအကွမျးဖကျကိုလကျခံပို, အမျိုးသမီးများတစ်ခါတစ်ရံဒီအကြောင်းအရာအားဖြင့်မှားပါနဲ့ဒီထက်ဖြစ်လာစေခြင်းငှါမဟုတ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာနောက်ထပ်ထိကပြန်သက်ရောက်မှုဤအမျိုးအစားများကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ (ဖြစ်ကောင်းကြောင့်လည်းထိုးစစ်ဖြစ်ပါသည်, ဥပမာ) အကြောင်းအရာ၏အင်္ဂါရပ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒါမှမဟုတ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်္ဂါရပ်များအားဖြင့်ပါသလား? ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီခြားနားချက် variable တွေကို၏ထားတဲ့အမျိုးအစားများကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် (အမျိုးသမီးယုံကြည်ချက် preexisting ဥပမာ, အတိတ်မီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးပညာရေး) ဤထိကပြန်သက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်။ ဒါဟာအစ objectifying အကြောင်းအရာပုံမှန်ထိတွေ့မှုကဤသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်လျှင်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများထဲကဒီအလုပ်ကိုယူအသုံးဝင်သောပါလိမ့်မယ်။ ဇီယာစေ့ et al ။ (2008) အကြမ်းဖက်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုပိုမိုအစီရင်ခံရေရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူသူတို့အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဆီသို့နှင့်မုဒိမ်းမှု-ထောက်ခံသဘောထားတွေဆီသို့ပိုပြီးသည်းခံစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။ တှေ့ရှိ အလားတူပင် Wright နှင့် Tokunaga (2015) ညစ်ညမ်း, ယောက်ျားရဲ့မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အဖြစ်မှန်တီဗီမှလူပျိုတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုကြောင့်သရုပ်ပြတစ်ဦးချင်းစီအလှည့်၌, အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပိုမိုလက်ခံမှုဟောကိန်းထုတ်သောအမျိုးသမီးများသည်ပိုမို objectification ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်လျှောက်လုံးမီဒီယာကျား, မများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍဆီသို့အမြင်များပုံဖော်အတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍယူဆခဲ့ကြသည်။ mainstream မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပြုသဘောဥပမာအရေးကြီးသောသတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အမျိုးသမီးမီဒီယာရဲ့မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အမျိုးသမီးများ၏အခြားသူတွေ '' ဆွဲဆောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအမျိုးသမီးရဲ့အမြင်များအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးစိုးရိမ်ပူပန်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာအကျဉ်းချုံးတွေ့ရှိချက်, ပိုမိုထောက်ခံမှုဓာတ်ခွဲခန်းထိတွေ့မှုနှင့်ဤအကြောင်းအရာပုံမှန်အစည်းအဝေး, နေ့တိုင်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်အကျိုးဆက်များတစ်အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတသမတ်တည်းသက်သေအထောက်အထားများ, သာ. ကြီးမြတ် Self-objectification ပိုးပန်းစံနမူနာအကြောင်းကိုပိုကျပုံစံယုံကြည်ချက်ပေး လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ရန်ဘက်ပြုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နှင့်အမျိုးသမီးဆီသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံစိတ်။ ထို့အပြင်ဤအကြောင်းအရာစမ်းသပ်ထိတွေ့အမျိုးသမီးအရည်အချင်းကို, စာရိတ္တနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တခုလျော့နည်းသွားအမြင်ရှိသည်ဖို့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်နေသည်။ သို့သော်သက်သေအထောက်အထားလည်း, ဤဆက်သွယ်မှုမကြာခဏရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျနော်တို့လောင်အမျိုးအစားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ preexisting ယုံကြည်ချက်, အထောက်အထားတွေကိုနှင့်အတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားဖော်ပြသည်။
Black နဲ့လက်တင်လူငယ် Rideout et al (သူတို့ရဲ့ဥရောပအမေရိကန်များထက်ပိုပြီးမီဒီယာကိုစားသုံးကြောင်း။ , ထပ်ခါတလဲလဲအစီရင်ခံစာများနေသော်လည်း 2010) ဤသည်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလူဦးရေကြားတွင်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်သုတေသနနီးပါးလည်းမရှိခဲ့ချေသည်။ ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်သည့် 135 ကြားတွင်နှစ်ခုသာလေ့လာမှုများ (Gordon ကမြင်ပါတယ်, 2008; Harrison & Fredrickson, 2003မီဒီယာနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုဤအုပ်စုအတွက်သီးခြားစမ်းသပ်ရန်အတွက်လူနည်းစုလူနည်းစုအလုံအလောက်ရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် Black-oriented media, rap, R&B နှင့် hip-hop ဗီဒီယိုများ (ဥပမာ Aubrey & Frisby, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြခြင်း) သည်အထူးသဖြင့်မြင့်မားသည်ဟူသောသက်သေအထောက်အထားများကြောင့်ဤကြီးကြပ်မှုသည်အထူးအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ 2011; Frisby & Aubrey၊ 2012) ။ ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံသဏ္onာန်အပေါ်မီဒီယာဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်ယခင်သုတေသနက Black-oriented ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Black ပုံရိပ်များကိုထိတွေ့ခြင်းကပိုမိုအားကောင်းစေသည် (Schooler, Ward, Merriwether, & Caruthers, 2004) ။ ထို့အပြင်သက်သေအထောက်အထားများက Black လူငယ်များကြားတွင်၎င်းတို့၏မီဒီယာနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုပုံစံများကိုလက်ခံခြင်းတို့အကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်နွယ်မှုများ (ဥပမာ - Ward, Hansbrough, & Walker,) 2005) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုယေဘုယျအားဖြင့်, ထိုမီဒီယာထိတွေ့အကြံပြုနှင့်လူနည်းစု-oriented မီဒီယာမှထိတွေ့မှု, အထူးသဖြင့်, Black နဲ့လက်တင်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားတဲ့တပ်ဖွဲ့များဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသနအာရုံကိုတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလူငယ်, ဒီအကြောင်းအရာဟာသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ, နှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များများအတွက်မီဒီယာ objectifying မှထိတွေ့မှု၏အဆင့်ဆင့်ကိုရည်မှတ်လိုအပ်ပါသည်။ လေ့လာမှုလည်းတိကျတဲ့လူမျိုးရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ (ဥပမာယေဇဗေလ) ၏လိုအပ်နေပါသည်။
လူကြိုက်များသောတေးဂီတ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့်အဖြစ်မှန်ပရိုဂရမ်များကဲ့သို့သောစာနယ်ဇင်းနည်းပါးသောမီဒီယာအမျိုးအစားများအတွက်သုတေသနများပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ လက်တွေ့အစီအစဉ်များသည် Nielsen အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုလွှမ်းမိုးထားသော်လည်းလက်တွေ့တွင်ဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သောလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုထိတွေ့ခြင်းသည်ကြည့်ရှုသူများ၏ယုံကြည်မှုများနှင့်ယူဆချက်များကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်သာသိရှိခဲ့သည်။ လူမှုမီဒီယာ၏ပံ့ပိုးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနများထပ်မံလိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကလေ့လာမှုများအရဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် Instagram တို့ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာများပေါ်တွင်လူများကသူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ထားသောဓာတ်ပုံများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်သည့်ပုံများ၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ထိုသို့သောလေ့လာမှုများ Daniels နှင့် Zurbriggen ၏အလုပ်ပါဝင်သည် (2016), De Vries နှင့်ပေတရု (2013), Manago, ရပ်ကွက်, Lemm, ရိဒ်နှင့် Seabrook (2015), နှင့်အတော်ကြာအခြားသူတွေ။ ဒီသုတေသနဒိုမိန်းက၎င်း၏နို့စို့အရွယ်၌တည်ရှိ၏ပေမယ့်ငါကဆယ်စုနှစ်၏အဆုံးအားဖြင့်သိသိသာသာကြီးထွားပါလိမ့်မယ်တွက်ဆထားကြောင်းသိရသည်။ အဖြစ်မှန်အစီအစဉ်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအင်္ဂါရပ် "စစ်မှန်သော" ရွယ်တူ (နှင့်မဟုတ်သရုပ်ဆောင်များကို) သောကြောင့်, သူတို့ရဲ့ objectifying အကြောင်းအရာထိတွေ့မှုပင် cull လိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင် သာ. ကြီး လူမှုရေးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် သာ. ကြီး ခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်း။ ဤနေရာတွင်စမ်းသပ်ဖို့အများကြီးပင်ကိုယ်မူလမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်။
မီဒီယာ Exposure နှင့်မီဒီယာလှုံ့ဆော်မှု၏အဓိပ္ပာယ်
ကျနော်တို့ကိုထပ်တိုးနှင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားပုံကိုအပ်ဒိတ်လုပ်နှင့်မီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်မီဒီယာလှုံ့ဆော်မှုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်မှာကျနော်တို့မီဒီယာအကြောင်းအရာလောင်ရသောထုံးစံပြောင်းလဲနေတဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Netflix, Hulu, နှင့်အခြား streaming များ options များနှင့်အတူကမီဒီယာအကြောင်းအရာတိကျတဲ့နယ်ပယ်စျေးကွက်မှအယူခံဖို့ပိုပြီးအထူးပြုဖြစ်လာသည်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာခဲ့သည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူ (သာ HGTV စောင့်ကြည့်အသုံးပြုပုံဥပမာ) အကြောင်းအရာ objectifying ရှောင်ရှားရန်ယခုပါသလဲ နောက်ထပ်လေ့လာမှုလက်ရှိမီဒီယာများ၏လိုအပ်ပုံစံများကိုအသုံးပြုသည်။ ငါတို့သည်လည်းနေဆဲဓာတ်ပုံတွေ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထက်ကျော်လွန်ရွှေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်အလုပ်အတွက်မီဒီယာ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပါဝင်သည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုများသောလေ့လာမှုပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာလှုံ့ဆော်မှုပါဝငျကွောငျးလိုအပ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုအားပေးဓာတ်ပုံတွေအခြေခံအကျဆုံးအဓိပ္ပာယ်မီဒီယာများမှာနှင့်မီဒီယာဒြပ်စင်၏တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်မှုများကိုလုပ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကြုံတွေ့ရသော objectifying မီဒီယာဖြားယောင်းဂီတ, ငါတို့ကိုချစ်သို့မဟုတ်မုန်းဇာတ်ကောင်များနှင့်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးပုံပြင်လိုင်းများ featuring မကြာခဏပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ အားထုတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပြင်ပတရားဝင်မှုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
ဆက်လက်အာရုံကိုတတ်နိုင်သမျှပြုပြီနှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာ objectifying များ၏သက်ရောက်မှုများမော်ဒ၏လိုအပ်ပါသည်။ Self-objectification ၏အကျိုးဆက်များ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SO နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရလဒ်များအကြားလင့်များဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါများစွာသောအချက်များဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျးအာရုံကိုမီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့် SO အကြားဆက်သွယ်မှုကိုဖျန်ဖြေသောအအချက်များလိုအပ်ပါသည်။ ယင်း၏ကနဦး Conceptual အတွက် Objectification သီအိုရီ, Self-objectification မီဒီယာထိတွေ့မှုကနေလမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ယေဘုယျမျှော်လင့်ချက်များပူဇော်ကြ၏။ သီအိုရီထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများ objectifying ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏အထပ်ထပ်အတွေ့အကြုံကို, တဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်၏အခြေခံပေါ်မှာအကဲဖြတ်ခံရဖို့အရာဝတ္ထုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုရန်စတင်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များ socializes သော။ စောဒကတက်သည် ကွပ်ထားတဲ့ယေဘုယျဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်လူမှုရေးဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအဖြစ်ဥပမာ Garcia က Coll et al (ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးရေးလူမှုဆက်ဆံရေး၏သီအိုရီအဖြစ်အများအပြားလူမှုဆက်ဆံရေးသီအိုရီများနှင့်မော်ဒယ်, တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။ , 1996) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေး (ဥပမာရပ်ကွက်, 2003), ကြောင်းသတင်းစကားများ၏ဂျမှလူမှုရေးမက်ဆေ့ခ်ျကိုမှထိတွေ့မှုကနေအများအပြားခြေလှမ်းများဖြစ်ဖွယ်ရှိရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်, မီဒီယာသုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာမက်ဆေ့ခ်ျကိုဂျမီဒီယာထိတွေ့မှုကနေအများအပြားခြေလှမ်းများရှိပါတယ်ဖော်ပြသည်။ (Aubrey အဖြစ်2007) စောဒကတက်, (စ။ 2) "[B က] body- နှင့်လိင်-related Self-သဘောထားအမြင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်, အမျိုးမျိုးသောသိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဖြန်ဖြေယန္တရားများမီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်ရလဒ်အကြားဆက်ဆံရေးတွင်ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်များပါတယ် ecause" ။
ဆက်စပ်မှုဒေတာကိုအသုံးပြု။ objectification သီအိုရီ၏အခြေခံမူစမ်းသပ်သုတေသီများယဉ်ကျေးမှုစံနမူနာ၏ internalization အပါအဝင်ဖြစ်နိုင်သောဖျန်ဖြေ, အများအပြားဖော်ထုတ်ဖို့စတင်ပါပြီ (Morry & Staska, 2001), ခန္ဓာကိုယ် Self-ဝိညာဏ် (Aubrey, 2007), နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှိုင်းယှဉ် (Fardouly et al ။ , 2015) ။ လက်ရှိထင်ရှားတဲ့မော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ Vandenbosch နှင့် Eggermont ရဲ့ (ဖြစ်ပါတယ်2012, 2015Self-objectification ၏) သုံးခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကို။ အထွေထွေရဝုဏ်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်အပေါ်မီဒီယာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနိုင်ငံတကာနှင့် Self-objectification မှတဆင့်မဟုတ်ဘဲတိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများ Self-objectification ၏လုပ်ငန်းစဉ်၏သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောနိုင်ငံတကာနှင့် Self-objectification, ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်သောအရာသည်၎င်း၏အပြုအမူအစိတ်အပိုင်း, အရင်အဦးနေရာသင့်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ ဒီ model ၏နှင့်အခြားအလားအလာပြုပြီ၏နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုများအပြင်, အလုပ်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အလားအလာမော်ဒစမ်းသပ်လိုအပ်ပါသည်။ အရာအဘို့မိန်းမတို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအာဏာအရှိဆုံးဖြစ်သနည်း အဘယ်အရာကိုမီဒီယာအချက်များမီဒီယာထိတွေ့ထားတဲ့ရန်ဒီဂရီပုံဖော်မယ်ဒါမှမဟုတ်သက်ရောက်မှုသည်မဟုတ်လော ထိုသို့သောရိပ်မိသရုပ်မှန်အဖြစ်ကြည့်ရှုသူပါဝင်ပတ်သက်မှုယန္တရားများ, ဒီမှာအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
ဤနေရာတွင်စမ်းသပ်ပြီးနမူနာငါ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုတေသနလိုက်တယ် (ဆိုလိုသည်မှာ, အနောကျပိုငျး, ပညာတတ်, စက်မှုထွန်းကားကြွယ်ဝသော, နှင့်ဒီမိုကရေစီ) တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများပြင်ပချဲ့ထွင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြနေပါသည်။ ပိုများသောလေ့လာမှုကိုမကြာခဏမီဒီယာများ၏အဆင့်မြင့် (Rideout et al လောင်သူကိုနိမ့်လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းတစ်ဦးချင်းစီ၏လိုအပ်နေပါသည်။ , 2010), နှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၏, United States မှာနှင့်အခြားစက်မှုနိုင်ငံများတွင်နှစ်ဦးစလုံး။ ပိုများသောလေ့လာမှုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၏သက်ရောက်မှုများလိုအပ်နေပါသည်။ ဤအရာမှတစ်ဦးထင်ရှားတဲ့ထောက်ခံချက်ခဲ့သည် ယား Task Force အစီရင်ခံစာ (2007) ။ လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းနှင့်ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နေသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်သစ်မှအချို့သည်လိင်ဆိုင်ရာမိန်းမငယ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင်အပြုသဘောဆောင်သောအမြင်များမရှိကြောင်းနှင့်ဤဘက်လိုက်မှုများကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများကကိုင်တွယ်ထားကြောင်းပြသသည် (Holland & Haslam, 2015; ကျောက်ခေတ် et al ။ , 2015).
ဤရွေ့ကားဒိုင်းနမစ်လူလတ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အဟောင်းတွေအရွယ်ရောက်သူတို့တွင်အဘယ်သို့အလုပ်လုပ်နှင့်ပတ်သက်။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သည်။ အချက်အလက်များအရခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုသည်သက်ကြီးအမျိုးသမီးများအကြားပျံ့နှံ့နေကြောင်း၊ SO သည်သက်ကြီးအမျိုးသမီးများကြားတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် SO သည်သက်ကြီးအမျိုးသမီးများကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ Clarke & Korotchenko ကိုကြည့်ပါ။ 2011) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အဖြစ်, မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်သို့မည်ပုံရှင်းလင်း အဘယ်သူမျှမ အဆိုပါ 135 အတွင်းလေ့လာမှုများအသက်-အလယ်တန်းသို့မဟုတ်အထက်လူကြီးများအပေါ်သီးသန့်အာရုံစူးစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ အသက်ကြီးသောမိန်းမတို့နုပျိုနှင့်အတူ sexy နှင့်အလှအပတူညီသောယဉ်ကျေးမှုရဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အလှတရားစံချိန်စံညွှန်းများ (Hines ကနေနောက်ထပ်လဲကျလို့ပေါ့, အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအသက်အရွယ်နုပျိုသောမိန်းမတို့သည်ထက်တူညီတဲ့သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိထိခိုက်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင် 2011) ။ သက်သေအထောက်အထားများအရအသက်အရွယ်ကြီးသောအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်များသည်လူကြိုက်များသောမီဒီယာများ (ဥပမာ - Bazzini, McIntosh, Smith, Cook, & Harris) တွင်အမျိုးသမီးများထက်နိမ့်ကျနေပြီးပုံပန်းသဏ္ဌာန်မတူကြောင်းဖော်ပြသည်။ 1997) ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာကိုထိတွေ့ခြင်းဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးများသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်မှာအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အသွင်အပြင်သည်သက်ကြီးအမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ်တွင်တူညီသောအဆင့်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (Clarke & Korotchenko, 2011) ။ အဲဒီအစား, အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးတွေအသွင်အပြင်အပေါ်ထက် function ကိုပိုမိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကဲဖြတ်လိမ့်မည် (Clarke & Korotchenko, 2011) ။ ဤရွေ့ကားပင်ကိုယ်မူလမေးခွန်းများကိုအနာဂတ်သုတေသနနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
လိင်ကျန်းမာရေးနှင့် function အပေါ်သက်ရောက်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်မီဒီယာနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်စိတ်ကန့်ကွက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီးများ၏လေ့လာမှုများစွာတွင်တွေ့ရှိချက်များအရမိမိကိုယ်ကိုပိုမိုမြင့်မားသောမိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုအရည်အချင်း၊ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုရှိခြင်း (Calogero & Thompson၊ 2009a, 2009b; ကလော်ဒတ် & Warren, 2014; ရမ်းဆေးနှင့်ဟော့တ် 2015; ဒါပေမယ့်ပြတ်သားတဲ့ရလဒ်တွေအတွက် Tiggemann & Williams ကိုကြည့်ပါ။2012) ။ ဤအ objectification သီအိုရီကခန့်မှန်းသည့်ဆက်သွယ်မှုများကိုဖြစ်သော်လည်းဤအသင်းအဖွဲ့များ၏ antecedents ၏လျော့နည်းနားလည်မှုရှိပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိ objectifying မီဒီယာမှထိတွေ့မှုတိုက်ရိုက်နှင့်အမျိုးသမီး (နှင့်ယောက်ျားရဲ့) တစ်ခုသွယ်ဝိုက်ပံ့ပိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်လည်ပတ်နှစ်ဦးစလုံးလဲ?
ဆက်လက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိကျစွာလက်မှာ Construction ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအစီအမံများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် theorizing အတွက်လိုအပ်နေပါသည်။ ပထမဦးစွာ, အမျိုးသမီးများ, ယေဘုယျအားဖြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအယူအဆကို၏တစ်ဦးချင်းစီ '' လက်ခံမှုမရှိအားကောင်းတဲ့, စံအတိုင်းအရှည်လည်းမရှိ။ ဒုတိယအချက်မှာနောက်ထပ်အလုပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၏ယားရဲ့အဓိပ်ပါယျ၏ကွဲပြားခြားနားအစိတ်အပိုင်းများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအစီအမံဖန်တီးစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ တည်ဆဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအဓိကအား Self-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ SO အစိတ်အပိုင်းမှမီဒီယာပံ့ပိုးမှုများကိုစုံစမ်းပြီ။ ဒါဟာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းတာမှုများ Self-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ multidimensional Construction တိုင်းတာရန်ကိုအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်လေ့လာမှုများအများစုကိုယ်ပိုင် Objectification ဖြစ်စေမေးခွန်းလွှာ, အ OBC စကေးဒါမှမဟုတ်နှစ်ဆယ့်ဖော်ပြချက်စမ်းသပ်ခြင်း၏ Self-စောင့်ကြည့် subscale ကိုအသုံးပြုသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ဤအကြေးခွံဝေဖန်မှုမပါဘဲမရှိကြပေ။ တဦးတည်းကိစ္စကဤအကြေးခွံများတစ်ဦးချင်းစီ Self-objectification တစ်အတိုင်းအတာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်, သဘောတရားချိန်ခွင် (Calogero အကြားတွင်ခြားနားချက်များလည်းမရှိကြောင်း, 2011) ။ အဆိုပါ SOQ နာတာရှည်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်ရေးတိုင်းတာခြင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းကိုကျော်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, နှင့်စောင့်ကြည့် subscale ၏တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာနှင့်အတူ, Calogero (2011) ဒီနှစ်ခုအပြုအမူတွေဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက် မဟုတ် အတူတူပါပဲနှင့်ကျွန်တော်သေးနှစ်ခုအကြေးခွံအတူတူပင်သို့မဟုတ်ကွဲပြားနောက်ခံဆောက်လုပ်ရေးကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိကောက်ချက်ချလို့မရပါဘူး။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ခန္ဓာကိုယ်၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏အရေးပါမှုကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် SOQ သည်“ လူများသည်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအမိန့်ပေးသည့်ဘဝအဆင့်အတန်းကိုဖြတ်သန်းလေ့မရှိ” သောကြောင့်ယင်း၏အတုအတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည် (Loughnan & Pacilli,2014, p ။ 314) ။ တစ်ဦးကတတိယစိုးရိမ်ပူပန်မှုအများအပြားအရည်အချင်းကိုကျော်အသွင်အပြင်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံအဖြစ် Self-objectification သတ်မှတ်သော်လည်း, ထို SOQ သာတစ်ခြား domains (ဥပမာ, ထောက်လှမ်းရေး, ကျေး) မှာအရည်အချင်းကို, ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အရည်အချင်းကိုမအာရုံစူးစိုက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သုတေသီများစကေးရဲ့လက်လှမ်းမမီကျော်လွန်သူတို့ရဲ့ယူဆချက် overextend ဖို့မအောက်မေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ငါမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုမှာသက်သေအထောက်အထားများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ Meta-analysis သည်များအတွက်မခေါ်ချင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဤနေရာတွင်ငါ၏အရည်မှန်းချက်ရှိပြီးသားရလဒ်များခွန်အားမှတ်တမ်းတင်ရန်ပေမယ့်လယ်ကိုလုပ်နေတာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မေးခွန်းများနှင့်ကိစ္စများကျန်ရှိနေခဲ့ပြီးအဘယ်အရာကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုထောင့်ပေးမပေးခဲ့သညျ။ ပြန်လည်သုံးသပ်၏ဤအမျိုးအစားမကြာခဏအသုံးဝင်သောပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင် (ဤနေရာတွင်အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 44, လေ့လာမှုများထုတ်ဝေခဲ့သည်) မီဒီယာ Self-objectification အပေါ်သက်ရောက်မှု objectifying မှထိတွေ့မှုစမ်းသပ်ခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှု (29 လေ့လာမှုများ) Meta-လေ့လာဆန်းစစ်လုပ်ဆောင်သွားရန်ယခုလယ်ပြင်၌ရှိသောပုံစံများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်း, ကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့စာရိတ္တနှင့် personhood (21 လေ့လာမှုများ), လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများနှင့်အပြုအမူ (23 လေ့လာမှုများ) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုထောက်ခံမှု (22 လေ့လာမှုများ) ၏အကဲဖြတ်။
ငါသက်ဆိုင်ရာဝေါဟာရများ၏နောက်ထပ်လေ့လာမှုနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားပေးချင်ပါတယ်: objectification, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, Self-objectificationနှင့် Self-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကွဲပြားခြားနားသောလယ်ကွင်းနှင့်သုတေသနအဖွဲ့များကွဲပြားခြားနားသောဤဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းယူနီဖောင်းချဉ်းကပ်မှုရှိပါသလော ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းနှစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမကြာသေးမီက (Zurbriggen ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်2013) နှင့် Gervais, ဘား, Klein နှင့် Allen က (နေဖြင့်2013), အဘယ်သူသည်ဤဝေါဟာရများကိုဆှေးနှေးနှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန်အခြေအနေတွင်ပူဇော်ကြ၏။ ငါသည်ဤဝေါဟာရများနှင့် ပတ်သက်. လယ်ပြင်၌မှေးမှိန်လာဝန်ခံဖို့နဲ့သူတို့ defining ဘယ်လို၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများရဲ့ start မှာရှင်းလင်းဖို့အနာဂတ်သုတေသီများတိုက်တွန်းပါသည်။ ဒါဟာအားလုံးစာဖတ်သူများအတူတူ Conceptual share ယူဆမရသင့်ပါတယ်။ ငါကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားနားလည်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်စတင်နိုင်ပြီး, ဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအတွက်သဘောတူညီချက်နှင့်ကွာခြားချက်ဒေသများတွင်ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်ဤဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုနေဘယ်လိုအတူတက်-ရှေ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။
မီဒီယာရှုခင်းပြောင်းလဲနေတဲ့သည်နှင့်မီဒီယာကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းများကိုပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ သုတေသီများအဖြစ်ကျနော်တို့ objectifying မီဒီယာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အစဉ်အလာမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လူသစ်တွေထည့်သွင်းဖို့နှစ်ဦးစလုံးအားဆက်လက်ရန်လိုအပ်သည်။
1. အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။ (2007) ။ မိန်းကလေးများများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ယား Task Force ၏အစီရင်ခံစာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။ မှရယူရန် http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report.aspx
2. Arima, AN (2003) ။ ဂျပန်ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်ကျား, မကျပုံစံ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 49 (1-2), 81-90 ။ Doi:
10.1023 / A: 1023965704387 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
3. * Aubrey, JS (2006a) ။ လိင်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် Self-objectification နှင့်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်မီဒီယာ objectifying ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ်2နှစ် panel ကိုလေ့လာမှုရလဒ်များ။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 56, 366-386 ။ Doi:
10.1111 / jcom.2006.56.issue-2 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
4. * Aubrey, JS (2006b) ။ လိင်ကကောလိပ်ကျောင်းမိန်းမတကာတို့ထက်မီဒီယာနှင့်ခန္ဓာကိုယ် Self-သဘောထားအမြင် objectifying ထိတွေ့: အရွေးချယ်ထိတွေ့မှုယူဆချက်တစ်ခုစာမေးပွဲနှင့် variable တွေကိုစိစစ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 55, 159-172 ။ Doi:
10.1007/s11199-006-9070-7 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
5. * Aubrey, JS (2007) ။ လိင်ကအနုတ်လက္ခဏာခန္ဓာကိုယ်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-သဘောထားအမြင်အပေါ်မီဒီယာထိတွေ့ objectifying ၏သက်ရောက်မှု: ခန္ဓာကိုယ် Self-ဝိညာဏ်၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေး။ mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း, 10 (1), 1-23 ။ Doi:
10.1080 / 15205430709337002 [တေလာနှင့် Francis Online]
6. * Aubrey, JS (2010) ။ မီဒီယာကနျြးမာရေးအကွံဉာဏျ၏ဘောင်နှင့်အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်-related Self-သဘောထားအမြင်အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေး: ကောင်းသောခံစားနှိုင်းယှဉ်ကောင်းသောရှာဖွေနေ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 63, 50-63 ။ Doi:
10.1007/s11199-010-9768-4 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
7. Aubrey, JS, & Frisby, CM (2011) ။ တေးဂီတဗီဒီယိုများတွင်လိင်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ခြင်း - လိင်နှင့်အမျိုးအစားကိုနှိုင်းယှဉ်သောအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း, 14 (4), 475-501 ။ Doi:
10.1080 / 15205436.2010.513468 [တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
8. * Aubrey, JS, & Gerding, အေ (၂၀၁၄) ။ Self- objectification ၏သိမြင်အခွန်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectifying ဂီတဗီဒီယိုများနှင့်နောက်ဆက်တွဲကြော်ငြာ၏အမျိုးသမီးထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ဆန်းစစ်။ မီဒီယာစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 21 (1), 22-32 ။
9. * Aubrey, JS, Henson, ဂျေ, Hopper, KM, & စမစ်, အက်စ် (2009) ။ ရုပ်ပုံတစ်ခုသည်မိမိကိုယ်မိမိနှင့် ပတ်သက်၍ စကားလုံး (၂၀) ​​လောက်တန်သင့်သည်။ အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်အရန့်ကွက်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိမှတ်ပြုခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသနအစီရင်ခံစာများ, 26 (4), 271-284 ။ Doi:
10.1080 / 08824090903293551 [တေလာနှင့် Francis Online]
10 ။ * Aubrey, JS, Hopper, KM, & Mbure, ဒဗလျူ (2011) ။ အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများကိုလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကောလိပ်ယောက်ျားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များအပေါ် အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏ဂျာနယ်, 55 (3), 360-379 ။ Doi:
10.1080 / 08838151.2011.597469[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
11 ။ * Aubrey, JS, & Taylor, LD (2009) ယောက်ျား၏နာတာရှည်နှင့်ယာယီအသွင်အပြင်နှင့်ဆက်စပ်သောပုံသဏ္primာန်များကိုဖော်ထုတ်ရာတွင်ယောက်ျားလေးမဂ္ဂဇင်းများ၏အခန်းကဏ္: - လောင်ဂျီတွဒ်နှင့်စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်များကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 35, 28-58 ။ Doi:
10.1111 / hcre.2008.35.issue-1 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
12 ။ Barlett, C တို့, သရသံ, C တို့, & Saucier, D. (2008) ။ မီဒီယာပုံရိပ်များ၏အမျိုးသားများ၏ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္concernsာန်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကို meta-analysis သည်။လူမှု၏ဂျာနယ်နှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ, 27 (3), 279-310 ။ [CrossRef]
13 ။ Bazzini, D. , McIntosh, ဒဗလျူ၊ စမစ်၊ အက်စ်၊ ကွတ်၊ အက်စ်နှင့်ဟယ်ရစ်၊ စီ (၁၉၉၇) ။ လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်တွင်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေသည့်အမျိုးသမီး - နိမ့်ကျစွာတင်ပြခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုမရှိခြင်း၊ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 36, 531-543 ။ Doi:
10.1007 / BF02766689 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®],[CSA]
14 ။ Beasley, ခ, & Collins က Standley, T. (2002) ။ ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အရေခွံ - ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်ကျား၊ mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း,5(3), 279-293 ။ Doi:
10.1207 / S15327825MCS0503_3 [တေလာနှင့် Francis Online], [CSA]
15 ။ * Beck, VS, Boys, အက်စ်, နှင်းဆီ, C တို့, & Beck, အီး (2012) ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများမှအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု - ဒဏ္myာရီလက်ခံမှုကိုမုဒိမ်းကျင့်ရန်နောက်ဆက်တွဲလား။ Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ်, 27, 3016-3031 ။ Doi:
10.1177 / 0886260512441078 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
16 ။ * Behm-Morawitz, အီး, & Mastro, D. (2009) ။ အမျိုးသမီးဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာနှင့်အမျိုးသမီးကိုယ်ကျိုးရှာမှုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 61 (11-12), 808-823 ။ Doi:
10.1007/s11199-009-9683-8 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
17 ။ * Behm-Morawitz, အီး, & Schipper, အက်စ် (2015) ။ ကျား၊ မ၊ လိင်ဆိုင်ရာနှင့်ဆိုက်ဘာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းများကို virtual world တွင်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း။ မီဒီယာစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။ Doi:
10.1027 / 1864-1105 / a000152 [CrossRef]
18 ။ * ဘဲလ်, ခ, Lawton, R. , & Dittmar, အိပ်ချ် (2007) ။ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏ကိုယ်ခန္ဓာမကျေနပ်မှုအပေါ်ဂီတဗီဒီယိုများတွင်ပါးလွှာသောမော်ဒယ်များ၏သက်ရောက်မှု။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်, 4, 137-145 ။ Doi:
10.1016 / j.bodyim.2007.02.003 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
19 ။ * Bernard, P. , Gervais, အက်စ်, Allen, ဂျေ, Campomizzi, အက်စ်, & Klein, O. (2012) ။ လူတစ် ဦး အားအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလက်ခံခြင်းကိုပေါင်းစပ်ခြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြန်လှန်အယူအဆ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 23 (5), 469-471 ။ Doi:
10.1177 / 0956797611434748 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
20 ။ * Bernard, P. , Gervais, အက်စ်, Allen, ဂျေ, Delmee, အေ, & Klein, O. (2015) ။ လိင်မှုကိစ္စမှသည်လူသားများအထိ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်လူသားထုကိုအလယ်အလတ်အဆင့်မြင့်အမျိုးသမီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအထိဖုံးကွယ်ထားသည်။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 39, 432-446 ။ Doi:
10.1177 / 0361684315580125 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
21 ။ * Bernard, P. , Loughnan, အက်စ်, Marchal, C တို့, Godart, အေ, & Klein, O. (2015) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာငြင်းပယ်မှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်မှုသည်သူစိမ်းမုဒိမ်းမှုအခြေအနေတွင်အဓမ္မပြုကျင့်သူကိုအပြစ်တင်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 72, 499-508 ။ Doi:
10.1007/s11199-015-0482-0 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
22 ။ * Bongiorno, R. , Bain, PG, & Haslam, N. (2013) ။ လိင်ရောင်းချခြင်းမရှိသောအခါ - လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ၏ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အထောက်အပံ့ကိုလျော့နည်းစေသည်။ PLoS ONE, 8 (12), e83311 ။ Doi:
10.1371 / journal.pone.0083311 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
23 ။ * Burgess, အမ်, & Burpo, အက်စ် (2012) ။ တေးဂီတဗီဒီယိုများ၏ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏မုဒိမ်းမှုအပေါ်သဘောထား။ ကောလိပ်ကျောင်းသားဂျာနယ်, 46 (4), 748-763 ။
24 ။ Burgess, အမ်, Stermer, SP, & Burgess, SR (2007) ။ လိင်၊ လိမ်လည်မှုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ - ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖုံးများတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဇာတ်ကောင်များ၏သရုပ်ဖော်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 57, 419-433 ။ Doi:
10.1007/s11199-007-9250-0 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
25 ။ မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ်, အယ်လ် (1975) ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအပေါ်လိင်-အခန်းကဏ္ဍသုတေသန။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 25, 107-131 ။ Doi:
10.1111 / jcom.1975.25.issue-4 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
26 ။ Calogero, R. (2011) ။ စစ်ဆင်ရေး Self-objectification: အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်အတိုင်းအတာများကိစ္စများ။ R. Calogero, အက်စ် Tantleff-Dunn, & JK Thompson က (Eds ။ ) ၌တည်၏ အကြောင်းရင်းများ, အကျိုးဆက်များနှင့်တန်ပြန်: အမျိုးသမီးတွေအတွက် self-objectification (စစ။ 23-49) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။ [CrossRef]
27 ။ Calogero, R. , & Thompson က, JK (2009a) ။ အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်အမျိုးသမီးများ၏အလောင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုများ။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်, 6, 145-148 ။ Doi:
10.1016 / j.bodyim.2009.01.001 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
28 ။ Calogero, R. , & Thompson က, JK (2009b) ။ အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိသျှကောလိပ်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု - မိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းပြRelationsနာများနှင့်ဆက်ဆံရေး။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 60 (3-4), 160-173 ။ Doi:
10.1007/s11199-008-9517-0 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
29 ။ Cato, အမ်, & လက်သမား, FRD (2010) ။ အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြား၌အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်များ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုသဘောပေါက်နားလည်ခြင်း။ mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း, 13, 270-288 ။ Doi:
10.1080 / 15205430903225589 [တေလာနှင့် Francis Online],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
30 ။ * Choma, BL, Foster, MD, & Radford, အီး (2007) ။ မီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုဆန်းစစ်ရန် objectification သီအိုရီကိုအသုံးပြုခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 56 (9-10), 581-590 ။ Doi:
10.1007 / s11199-007-9200-x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
31 ။ * Cikara, အမ်, Eberhardt, ဂျေ, & Fiske, အက်စ် (2010) ။ အေးဂျင့်မှအရာ ၀ တ္ထုများ - လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ထားနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများသည်လိင်ဆိုင်ရာပစ်မှတ်များသို့။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 23 (3), 540-551 ။ Doi:
10.1162 / jocn.2010.21497 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
32 ။ * Civile, C တို့, & Obhi, အက်စ် (2015) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမိန်းမများနှင့်ယောက်ျားများကိုပါဝါ၊ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်း။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။ Doi:
10.1177 / 0361684315604820 [CrossRef]
33 ။ Clarke, အယ်လ်, & Korotchenko, အေ (2011) ။ အိုမင်းခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ် - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အိုပေါ်ကနေဒါဂျာနယ်, 30 (3), 495-510 ။ Doi:
10.1017 / S0714980811000274 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
34 ။ Claudat, K. , & Warren, C. (2014) ။ လိင်လှုပ်ရှားမှုများအတွင်းမိမိကိုယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသတိရှိခြင်းနှင့်ကောလိပ်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်, 11 (4), 509-515 ။ Doi:
10.1016 / j.bodyim.2014.07.006 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
35 ။ Coyne, SM, Padilla-Walker, LM, & Howard, အီး (2013) ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင်ပေါ်ထွက်လာခြင်း - ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏မီဒီယာအသုံးပြုမှု၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဖြည့်ဆည်းမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ထွန်းသစ်စလူကြီး, 1 (2), 125-137 ။ Doi:
10.1177 / 2167696813479782 [CrossRef]
36 ။ * Dakanalis, A. , Di Mattei, VE, Bagliacca, EP, Prunas, A. , Sarno, L. , Priva, G. , & Zanetti, MA (၂၀၁၂) ။ အီတလီအမျိုးသားများကြားအစာစားခြင်းအမူအကျင့်များ - မီဒီယာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်လိင်နှင့်တိမ်းညွတ်မှုကွဲပြားခြားနားမှု။ အစာစားခြင်း Disorders, 20 (5), 356-367 ။ Doi:
10.1080 / 10640266.2012.715514 [တေလာနှင့် Francis Online], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
37 ။ * Daniels, အီး (2009) ။ လိင်တ္ထု, အားကစားသမားများနှင့် sexy အားကစားသမား: ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေအားကစားသမားများ၏မီဒီယာကိုယ်စားဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းအမျိုးသမီးတွေ impact နိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 24 (4), 399-422 ။ Doi:
10.1177 / 0743558409336748[CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
38 ။ * Daniels, အီး (2012) ။ ခိုင်မာတဲ့နှိုင်းယှဉ် sexy: အဘယျသို့မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုအမျိုးသမီးအားကစားသမား၏ထင်ပါတယ်။ အသုံးချ Developmental စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 33, 79-90 ။ Doi:
10.1016 / j.appdev.2011.12.002 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
39 ။ * ဒံယေလ, အီး, & Wartena, အိပ်ချ် (2011) ။ အားကစားသမား (သို့) လိင်သင်္ကေတ - အမျိုးသမီးအားကစားသမားတွေရဲ့မီဒီယာကိုယ်စားပြုပုံတွေကိုယောက်ျားလေးတွေဘယ်လိုမြင်သလဲ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 65 (7-8), 566-579 ။ Doi:
10.1007/s11199-011-9959-7 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
40 ။ Daniels, အီး, & Zurbriggen, အီး (2016) ။ sexy ဈေးနှုန်း - ကြည့်ရှုသူများ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့်မသက်ဆိုင်သော Facebook ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်။ လူကြိုက်များသောမီဒီယာယဉ်ကျေးမှုစိတ်ပညာ,5(1), 2-14 ။ Doi:
10.1037 / ppm0000048 [CrossRef]
41 ။ * Dens, N. , De Pelsmacker, P. , & Janssens, W. (2009) ။ ဘယ်လ်ဂျီယံအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ခန္တာကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းအပေါ်ကြော်ငြာခြင်းတွင် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်မော်ဒယ်လ်များ၏ဆိုးကျိုးများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 60, 366-378 ။ Doi:
10.1007/s11199-008-9541-0 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
42 ။ de Vries, DA, & ပေတရု, ဂျေ (2013) ။ ပြသထားသောအမျိုးသမီးများ - အွန်လိုင်းပေါ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုပုံဖော်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 29, 1483-1489 ။ Doi:
10.1016 / j.chb.2013.01.015 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
43 ။ * ဇီယာစေ့, K. , ဘရောင်း, ခ, & Collins က, အမ် (2008) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုကိုသည်းခံနိုင်မှုအပေါ်လိင်ပုံစံဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စမ်းသပ်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 44, 1402-1408 ။ Doi:
10.1016 / j.jesp.2008.06.002 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
44 ။ ဇီယာစေ့, K. , & Thill, K. (2007) ။ ဗွီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်များနှင့်ကျား၊ မရေးရာအခန်းကဏ္ the များအားပေါင်းသင်းခြင်း - လူငယ်များ၏သဘောထားသည်လိင်အရမီဒီယာပုံဖော်ခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသည် လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 57, 851-864 ။ Doi:
10.1007/s11199-007-9278-1 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
45 ။ Down, အီး, & စမစ်, SL (2010) ။ hypersexuality နှင့်ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ခြင်းဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်များပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 62 (11), 721-733 ။ Doi:
10.1007/s11199-009-9637-1 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
46 ။ * Driesmans, K. , Vandenbosch, L. , & Eggermont, S. (2015) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုအပေါ်မုဒိမ်းကျင့်မှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းကိုတိုးပွားစေသည်။ ကနျြးမာရေးဂျာနယ်များအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲ,4(2), 91-94 ။ Doi:
10.1089 / g4h.2014.0055 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
47 ။ * Eggermont, အက်စ်, Beullens, K. , & ဗန်ဒန် Bulck, ဂျေ (2005) ။ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ခန္ဓာမကျေနပ်မှု - ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မျှော်လင့်ချက်များ၏ဖျန်ဖြေခြင်းအခန်းကဏ္။ ။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး, 30, 343-357 ။ Doi:
10.1515 / comm.2005.30.3.343 [CrossRef]
48 ။ * Fardouly, ဂျေ, Diedrich, PC, Vartanian, LR, & Halliwell, အီး (2015) ။ မိန်းမငယ်များတွင်မီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုတွင်အသွင်အပြင်နှိုင်းယှဉ်မှု၏ကြားခံအခန်းကဏ္ role ။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 39, 447-457 ။ Doi:
10.1177 / 0361684315581841 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
49 ။ * Farquhar, JC, & Wasylkiw, L. (2007) ။ အမျိုးသားများ၏မီဒီယာပုံရိပ်များ - ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ကူးစိတ်သန်း၏လမ်းကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်များ။ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ, 8 (3), 145-160 ။ Doi:
10.1037 / 1524-9220.8.3.145 [CrossRef]
50 ။ Ferris, AL, Smith, SW, Greenberg, BS, & Smith, SL (2007) ။ အဖြစ်မှန်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း၏ကြည့်ရှုသူအမြင်များ၏အဖြစ်မှန်။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 57 (3), 490-510 ။ Doi:
10.1111 / jcom.2007.57.issue-3 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
51 ။ Flynn က, MA, ပန်းခြံ, S.-Y. , Morin, DT, & Stana, အေ (2015) ။ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်အစစ်အမှန် - MTV docusoap ဇာတ်ကောင်များ၏ကိုယ်ခန္ဓာစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 72 (5-6), 173-182 ။ Doi:
10.1007/s11199-015-0464-2 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
52 ။ * Ford, TE, Boxer, CF, Armstrong, J. , & Edel, JR (2008) ။ “ ဟာသတစ်ခုတည်း” ထက်မက - လိင်အရအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဟာသများ၏စိတ်စွန်းကွက်မှုများကိုဖြန့်ချိသောလုပ်ဆောင်ချက်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 34 (2), 159-170 ။ Doi:
10.1177 / 0146167207310022 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
53 ။ * Ford, TE, Woodzicka, JA, Petit, WE, Richardson, K. , & Lappi, SK (2015) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာသအမျိုးသမီးများအတွက်ပြည်နယ် Self- objectification ၏မောင်းနှင်မှုအဖြစ်။ ဟာသ, 28 (2), 253-269 ။ Doi:
10.1515 / ဟာသ-2015-0018 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
54 ။ * Fox က, ဂျေ, & Bailenson, ဂျေ (2009) ။ Virtual virgins and vamps - အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စွဲလန်းနေသောမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြည့်ရှုခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 61, 147-157 ။ Doi:
10.1007/s11199-009-9599-3 [CrossRef],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
55 ။ * Fox က, ဂျေ, Bailenson, JN, & Tricase, အယ်လ် (2013) ။ လိင်မှုကိစ္စပြုသော virtual တည်များ၏ဂျ: Proteus အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် avatars မှတဆင့် Self- objectification ၏အတွေ့အကြုံများကို။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 29 (3), 930-938 ။ Doi:
10.1016 / j.chb.2012.12.027[CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
56 ။ * Fox, ဂျေ, Ralston, RA, Cooper က, CK, & ဂျုံးစ်, KA (2014) ။ လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်သောအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသမီးများအားအဓမ္မပြုကျင့်မှု၊ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 39 (3), 349-362 ။ Doi:
10.1177 / 0361684314553578 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
57 ။ Fredrickson, ခ, & Roberts သည်, တီ (1997) ။ သတ်မှတ်ချက်သီအိုရီ - အမျိုးသမီးများနေထိုင်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုနားလည်ရန်။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 21, 173-206 ။ Doi:
10.1111 / j.1471-6402.1997.tb00108.x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
58 ။ Fredrickson, ခ, Roberts သည်, တီ, Noll, အက်စ်, Quinn, D. , & Twenge, ဂျေ (1998) ။ ဒါကရေကူးဝတ်စုံကခင်ဗျားဖြစ်လာတယ်။ လိင်ကွဲပြားမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ တားဆီးထားသောအစာစားခြင်းနှင့်သင်္ချာဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 75, 269-284 ။ Doi:
10.1037 / 0022-3514.75.1.269 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
59 ။ Frisby, CM, & Aubrey, JS (၂၀၁၂) ။ အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များ၏တေးဂီတဗီဒီယိုများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်လူမျိုးနှင့်အမျိုးအစား။ဆက်သွယ်ရေး Howard ဂျာနယ်, 23 (1), 66-87 ။ Doi:
10.1080 / 10646175.2012.641880 [တေလာနှင့် Francis Online]
60 ။ Fullerton, JA, & Kendrick, အေ (2000) ။ ယူအက်စ်စပိန်ဘာသာစကားရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများပုံဖော်ခြင်း။သတင်းစာပညာနှင့် Mass ဆက်သွယ်ရေးလပတ်, 77 (1), 128-142 ။ Doi:
10.1177 / 107769900007700110 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
61 ။ * Galdi, အက်စ်, Maass, အေ, & Cadinu, အမ် (2014) ။ မီဒီယာသတ်မှတ်ခြင်း - ကျား၊ မရေးရာကဏ္ role စံနှုန်းများနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောင့်ယှက်မှုများအပေါ်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 38 (3), 398-413 ။ Doi:
10.1177 / 0361684313515185 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
62 ။ Ganahl, JD, Kim, K. , & Baker, S. (2003) ။ ကွန်ယက်ကြော်ငြာများ၏ longitudinal analysis သည်ကြော်ငြာများကျား၊ မကိုပုံဖော်ပုံ။အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မှမီဒီယာအစီရင်ခံစာ, 31 (2), 11-15 ။
63 ။ Garcia Coll, C, Lamberty, G. အ, Jenkins, R. , McAdoo, H. , Crnic, K. , Wasik, B. , & Garcia, H. (1996) ။ လူနည်းစုကလေးများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအရည်အသွေး၏လေ့လာမှုတစ်ခု Integrated မော်ဒယ်။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, 67 (5), 1891-1914 ။ Doi:
10.2307 / 1131600[CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
64 ။ Gervais, အက်စ်, Bernard, P. , Klein, O. , & Allen က, ဂျေ (2013) ။ objectification နှင့် dehumanization ၏ပေါင်းစည်းသီအိုရီဆီသို့။Motivation အပေါ် Nebraska စာတမ်းဖတ်ပွဲ, 60, 1-23 ။ [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
65 ။ * Gervais, အက်စ်, Vescio, တီ, & Allen က, ဂျေ (2011) ။ ဘယ်အချိန်မှာလူလဲလှယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုရှိပါသလဲ လိင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖုန်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လူမှုစိတ်ပညာဗြိတိသျှဂျာနယ်, 51 (4), 499-513 ။ Doi:
10.1111 / j.2044-8309.2010.02016.x [CrossRef],[PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
66 ။ * Gervais, အက်စ်, Vesico, TK, Förster, ဂျေ, Maass, အေ, & Suitner, C. (2012) ။ အမျိုးသမီးများကိုအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ဘက်လိုက်မှုရှိသည်။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဥရောပဂျာနယ်, 42 (6), 743-753 ။ Doi:
10.1002 / ejsp.1890 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
67 ။ * Glick, P. , Larsen, အက်စ်, ဂျွန်ဆင်, C တို့, & Branstiter, အိပ်ချ် (2005) ။ အနိမ့်နှင့်အဆင့်မြင့်အလုပ်အကိုင်များတွင် sexy အမျိုးသမီးများ၏အကဲဖြတ်။အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 29, 389-395 ။ Doi:
10.1111 / pwqu.2005.29.issue-4 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
68 ။ * ဂေါ်ဒွန်, အမ် (2008) ။ အလှအပနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပေါ်အာဖရိကန်အမေရိကန်မိန်းကလေးငယ် '' အာရုံစိုက်ဖို့မီဒီယာပံ့ပိုးမှုများကို: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏အကျိုးဆက်များကိုစူးစမ်းခြင်း။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 32, 245-256 ။ Doi:
10.1111 / j.1471-6402.2008.00433.x[CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
69 ။ * Grabe, အက်စ်, & Hyde, JS (2009) ။ အမျိုးသမီးဆယ်ကျော်သက်များအကြားကိုယ်ခန္ဓာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ MTV နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များ။ အသုံးချလူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 39, 2840-2858 ။ Doi:
10.1111 / (ISSN) 1559-1816 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
70 ။ Grabe, အက်စ်, ရပ်ကွက်, LM, & Hyde, JS (2008) ။ အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ခန်ဓာပုံရိပ်အတွက်မီဒီယာ၏အခန်းကဏ္: - စမ်းသပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကို meta-analysis လုပ်ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 134 (3), 460-476 ။ [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
71 ။ Graff, K. , Murnen, အက်စ်, & Krause, AK (2013) ။ အနိမ့်ဖြတ်ရှပ်အင်္ကျီများနှင့်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် - မဂ္ဂဇင်း၏မိန်းကလေးမဂ္ဂဇင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများတွင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလိင်ဆက်ဆံမှုတိုးပွားလာခြင်း လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 69 (11-12), 571-582 ။ Doi:
10.1007/s11199-013-0321-0 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
72 ။ * Graff, K. , Murnen, အက်စ်, & Smolak, အယ်လ် (2012) ။ အလေးအနက်ထားခံရဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွန်း? ကလေးဆန်သောအဝတ်အစားများနှင့်လိင်ဆန်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏အမြင်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 66, 764-775 ။ Doi:
10.1007/s11199-012-0145-3 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
73 ။ * Grey က K. , Knobe, ဂျေ, Sheskin, အမ်, Bloom, P. , & Barrett, အယ်လ် (2011) ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထက်ပိုသည် - စိတ်ကိုအာရုံနှင့် objectification ၏သဘောသဘာဝ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 101 (6), 1207-1220 ။ Doi:
10.1037 / a0025883 [CrossRef], [PubMed],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
74 ။ Groesz, LM, Levine, MP, & Murnen, SK (2002) ။ ခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုအပေါ်ပါးလွှာသောမီဒီယာပုံရိပ်များ၏စမ်းသပ်တင်ဆက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ် Meta-analytic ပြန်လည်သုံးသပ်။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 31, 1-16 ။ [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
75 ။ * Gurung, R. , & Chrouser, C တို့ (2007) ။ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုခန့်မှန်းခြင်း - လှုံ့ဆော်ပေးသောအဝတ်အစားနှင့်လေ့လာသူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်အရေးပါသလောလိင်အခန်းကဏ္ဍ, 57, 91-99 ။ Doi:
10.1007 / s11199-007-9219-z [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
76 ။ * Halliwell, အီး, Malson, အိပ်ချ်, & Tischner, ဗြဲ (2011) ။ အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားပေးမှုအဖြစ်ပြသသည့်ခေတ်မီမီဒီယာများသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိသလား။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 35 (1), 38-45 ။ Doi:
10.1177 / 0361684310385217[CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
77 ။ * Hargreaves, DA, & Tiggemann, အမ် (2003) ။ အမျိုးသမီးများ၏“ ပါးလွှာသောစံနမူနာများ” မီဒီယာပုံရိပ်များနှင့်မိန်းကလေးများအပေါ်ယောက်ျားလေးများ၏သဘောထား။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 49 (9-10), 539-544 ။ Doi:
10.1023 / A: 1025841008820 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
78 ။ * Harper ကို, ခ, & Tiggemann, အမ် (2008) ။ ပါးလွှာသောစံပြမီဒီယာပုံရိပ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်း၊ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 58, 649-657 ။ Doi:
10.1007 / s11199-007-9379-x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
79 ။ * Harrison, K. , & Fredrickson, BL (2003) ။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အမျိုးသမီးများအတွက်အားကစားမီဒီယာ၊ မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 53, 216-232 ။ Doi:
10.1111 / jcom.2003.53.issue-2 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®],[CSA]
80 ။ * Harrison, LA, & Secarea, AM (2010) ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးသမီးအားကစားသမားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏သဘောထား။ အားကစားအပြုအမူများ၏ဂျာနယ်, 33 (4), 403-426 ။
81 ။ Hatton, အီး, & Trautner, MN (2011) ။ တန်းတူအခွင့်အလမ်း objectification? အဖုံးအပေါ်ယောက်ျားမိန်းမတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Rolling Stone. လိင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု, 15 (3), 256-278 ။ Doi:
82 ။ Heflick, N. , & Goldenberg, ဂျေ (2014) ။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်လုံးချင်းကြည့်ခြင်း - အမျိုးသမီးများပကတိသတ်မှတ်ခြင်း။ စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံအတွက်လက်ရှိဦးတည်, 23 (3), 225-229 ။ Doi:
10.1177 / 0963721414531599 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
83 ။ * Heflick, N. , Goldenberg, ဂျေ, Cooper, D. , & Puvia, အီး (2011) ။ အမျိုးသမီးများမှအရာဝတ္ထုများအထိ - အသွင်အပြင်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ကျား၊ မရေးရာနှင့်နွေးထွေးမှု၊ စမ်းသပ်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 47, 572-581 ။ Doi:
10.1016 / j.jesp.2010.12.020 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
84 ။ Henrich, ဂျေ, Heine, SJ, & Norenzayan, အေ (2010) ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးလူလား။ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ, 33, 61-83 ။ Doi:
10.1017 / S0140525X0999152X [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
85 ။ Hines, R. (2011) ။ အိုမင်းအမျိုးသမီးစိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏သက်ရောက်မှု: အမာဂျင်ပါ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 65 (7-8), 632-646 ။ Doi:
10.1007/s11199-011-9978-4 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
86 ။ * Hitlan, RT ကို, Pryor, JB, Hesson-McInnis, အက်စ်, & Olson, အမ် (2009) ။ ကျား၊ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 61 (11-12), 794-807 ။ Doi:
10.1007/s11199-009-9689-2 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
87 ။ * ဟော်လန်, အီး, & Haslam, N. (2013) ။ အလေးချိန်ထိုက်တန်: အဝလွန်ခြင်းကိုပါးလွှာသောပစ်မှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 37 (4), 462-468 ။ Doi:
10.1177 / 0361684312474800 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
88 ။ * ဟော်လန်, အီး, & Haslam, N. (2015) ။ ချစ်စရာကောင်းသောအရာ - prepubescent မိန်းကလေးများ၏အမျိုးအစား။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။ Doi:
10.1177 / 0361684315602887 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
89 ။ Holmstrom, AJ (2004) ။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုအပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှု: Meta-analysis သည်။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာဂျာနယ်, 48, 196-217 ။ [တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
90 ။ * Hopper, KM, & Aubrey, JS (2011) ။ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုယ် ၀ န်းဝိုင်းကြည့်ခြင်းအပေါ်ကိုယ် ၀ န်ရှိနာမည်ကြီးများအကြောင်းနာမည်ကြီးအနုပညာသတင်းမဂ္ဂဇင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 40 (6), 767-788 ။ Doi:
10.1177 / 0093650211422062[CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
91 ။ * Hust, အက်စ်, & လဲ့, အမ် (2008) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification, အားကစားပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်ဂီတရုပ်မြင်သံကြား။ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မှမီဒီယာအစီရင်ခံစာ, 36 (1), 16-23 ။
92 ။ Ibroscheva, အီး (2007) ။ အရှေ့နဲ့အနောက်အကြားဖမ်းမိ? ဘူဂေးရီးယားရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်ကျားမ၏ပုံဖော်ခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 57 (5-6), 409-418 ။ Doi:
10.1007 / s11199-007-9261-x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
93 ။ ဂျွန်ဆင်, P. , McCreary, D. , & Mills က, ဂျေ (2007) ။ အမျိုးသားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာအပေါ်တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမီဒီယာပုံရိပ်များ၏ထိတွေ့မှု။ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ, 8 (2), 95-102 ။ Doi:
10.1037 / 1524-9220.8.2.95 [CrossRef]
94 ။ * ဂျွန်ဆင်, V. , & Gurung, R. (2011) ။ အခြားအမျိုးသမီးများကအမျိုးသမီးများ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုငြင်းပယ်ခြင်း - အရည်အချင်း၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 65, 177-188 ။ Doi:
10.1007/s11199-011-0006-5 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
95 ။ Kim, SY, Seo, YS, & Baek, KY (2013) ။ တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးများအကြားသတိရှိခြင်းမျက်နှာ - objectification သီအိုရီကိုတိုးချဲ့ခြင်း။ တိုင်ပင်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 61 (1), 24-36 ။ Doi:
10.1037 / a0034433 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
96 ။ Kistler, ME, & Lee, MJ (2009) ။ လိင်မှုကိစ္စဟစ်ဟော့ဂီတဗီဒီယိုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏လိင်သဘောထားအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသလား။ mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း, 13 (1), 67-86 ။ Doi:
10.1080 / 15205430902865336 [တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
97 ။ * Krawczyk, R. , & Thompson က, JK (2015) ။ အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်သောကြော်ငြာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအစိုးရ၏မကျေနပ်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် - ကျား၊ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်, 15, 109-119 ။ Doi:
10.1016 / j.bodyim.2015.08.001 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
98 ။ * Lanis, K. , & Covell, K. (1995) ။ ကြော်ငြာတွင်ပါသောအမျိုးသမီးများ၏ပုံများ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားအပေါ်သက်ရောက်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 32 (9-10), 639-649 ။ Doi:
10.1007 / BF01544216 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
99 ။ * Lavine, အိပ်ချ်, Sweeney, D. , & Wagner, အက်စ် (1999) ။ ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပစ္စည်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်း - ကိုယ်ခန္ဓာမကျေနပ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 25 (8), 1049-1058 ။ Doi:
10.1177 / 01461672992511012 [CrossRef],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
100 ။ * Loughnan, အက်စ်, Haslam, N. , Murnane, တီ, Vaes, ဂျေ, Reynolds က, C. , & Suitner, C. (2010) ။ ဓမ္မဓိification္ဌာန်ကျကျခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကို ဦး တည်သည်။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဥရောပဂျာနယ်, 40, 709-717 ။ [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
101 ။ Loughnan, အက်စ်, & Pacilli, အမ် (2014) ။ အခြားသူများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံခြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်အဝမြေပုံထုတ်ခြင်းဆီသို့။ စမ်းသပ်ခြင်း, Psychometrics, အသုံးချစိတ်ပညာအတွက်နည်းလမ်း, 21 (3), 309-325 ။ Doi:
10.4473 / TPM21.3.6 [CrossRef]
102 ။ * Loughnan, အက်စ်, Pina, အေ, Vasquez, EA, & Puvia, အီး (2013) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်မှုသည်မုဒိမ်းမှုခံရသူကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ခံစားနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုလျော့နည်းစေသည်။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 37 (4), 455-461 ။ Doi:
10.1177 / 0361684313485718 [CrossRef],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
103 ။ * Machia, အမ်, & သိုးသငယ်, အက်စ် (2009) ။ လိင်ဆိုင်ရာအပြစ်ကင်းစင်ခြင်း - မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများ၏ဆိုးကျိုးများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးငယ်များအဖြစ်ပုံဖော်ခြင်းမီဒီယာစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 21 (1), 15-24 ။ Doi:
10.1027 / 1864-1105.21.1.15 [CrossRef]
104 ။ * MacKay, N. , & Covell, K. (1997) ။ အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားအပေါ်ကြော်ငြာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 36 (9-10), 573-583 ။ Doi:
10.1023 / A: 1025613923786 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
105 ။ Manago, AM, ရပ်ကွက်, LM, Lemm, K. , ရိဒ်, အယ်လ်, & Seabrook, R. (2015) ။ ကောလိပ်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက် Facebook ပါ ၀ င်မှု၊ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 72 (1-2), 1-14 ။ Doi:
10.1007/s11199-014-0441-1 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
106 ။ McKinley, N. , & Hyde, JS (1996) အဆိုပါရည်ရွယ်ထားခန္ဓာကိုယ်သိစိတ်စကေး: ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြု။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 20, 181-215 ။ Doi:
10.1111 / j.1471-6402.1996.tb00467.x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
107 ။ Messineo, MJ (2008) ။ Black ကဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာကြော်ငြာထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုအပြုသဘောကျားကိုယ်စားပြုဖော်ကျူးပါသလား? လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 59 (9-10), 752-764 ။ Doi:
10.1007 / s11199-008-9470-y က [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
108 ။ Michael, MS, Parent, MC, & Moradi, B. (2013) ။ ကြွက်သား - စံနမူနာပုံရိပ်များထိတွေ့လိင်ကွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအမျိုးသားများအတွက် Self- objectification အကျိုးဆက်များရှိပါသလား ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ, 14 (2), 175-183 ။ Doi:
10.1037 / a0027259 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
109 ။ * Milburn, MA, Mather, R. , & Conrad, SD က (2000) ။ ရက်စွဲမုဒိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများအားကန့်ကွက်သည့် R-rated ရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းများကိုကြည့်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 43 (9-10), 645-664 ။ Doi:
10.1023 / A: 1007152507914 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
110 ။ Miller ကအမ်, & Summers, အေ (2007) ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းမဂ္ဂဇင်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်များ၏အခန်းကဏ္, များ၊ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 57 (9-10), 733-742 ။ Doi:
10.1007/s11199-007-9307-0 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
111 ။ * Mischner, IHS, van Schie, HT, Wigboldus, DHJ, van Baaren, RB, & Engels, RCME (2013) ။ ကြီးမားသောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု - ဂီတဗီဒီယိုများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်မိန်းမပျိုများ၌ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်, 10 (1), 26-34 ။ Doi:
10.1016 / j.bodyim.2012.08.004 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
112 ။ Moradi, ခ, & Huang က, Y. (2008) ။ အမျိုးသမီးများ၏သတ်မှတ်ချက်သီအိုရီနှင့်စိတ်ပညာ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၏တိုးတက်မှုများနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွှန်ချက်များ။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 32, 377-398 ။ Doi:
10.1111 / j.1471-6402.2008.00452.x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
113 ။ * Morry, M. , & Staska, S. (2001) ။ မဂ္ဂဇင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - တက္ကသိုလ်၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများအတွက်အစာစားခြင်းသဘောထားများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ကျေနပ်မှု။ အပြုအမူသိပ္ပံ၏ကနေဒါဂျာနယ်, 33 (4), 269-279 ။ Doi:
10.1037 / h0087148 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
114 ။ * Mulgrew, KE, & Hennes, SM (2015) ။ လုပ်ဆောင်ချက် - နှင့်heticစတြေးလျအမျိုးသမီးများ၏ခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုအပေါ်ဗေဒ - အာရုံစူးစိုက်သောပုံရိပ်များ၏သက်ရောက်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 72 (3-4), 127-139 ။ Doi:
10.1007/s11199-014-0440-2 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
115 ။ * Mulgrew, KE, Johnson, LM, Lane, BR, & Katsikitis, M. (2013) ။ အမျိုးသားများခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုအပေါ်ဗေဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပုံရိပ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ, 15 (4), 452-459 ။ Doi:
10.1037 / a0034684 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
116 ။ Murnen, SK, & Smolak, အယ်လ် (2013) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ internalizing ၏ဆုလာဘ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ: "ငါမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးကျော်ကြားသောသိပ္ပံပညာရှင်ထက်ကျော်ကြားဖက်ရှင်မော်ဒယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်"။ အီး Zurbriggen & TA Roberts သည် (Eds ။ ) တွင်, မိန်းကလေးများနှင့် girlhood များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (စစ။ 235-256) ။ နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
117 ။ နယ်လ်ဆင်, MR, & Paek, H.-J. (2008) ။ နိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံတွင်တီဗွီကြော်ငြာတွင်အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမော်ဒယ်များ၏အချည်းနှီးရှိသည်။Advertising ကြော်ငြာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 27 (5), 715-744 ။ Doi:
10.2501 / S0265048708080281 [တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
118 ။ * Nezlek, JB, Krohn, W. , Wilson, D. , & Maruskin, L. (2015) ။ အားကစားသမားများ၏လိင်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 155 (1), 1-11 ။ Doi:
10.1080 / 00224545.2014.959883 [တေလာနှင့် Francis Online], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
119 ။ Noll, အက်စ်, & Fredrickson, ခ (1998) ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်အမြင်သေးခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာအရှက်ကွဲခြင်း၊အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 22, 623-636 ။ Doi:
10.1111 / j.1471-6402.1998.tb00181.x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
120 ။ Nowatzki, ဂျေ, & Morry, အမ် (2009) ။ Self-sexualizing အပြုအမူနှင့်ပတ်သက်။ အမျိုးသမီးများ၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်လက်ခံမှု။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 33, 95-107 ။ Doi:
10.1111 / j.1471-6402.2008.01477.x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
121 ။ * Overstreet, N. , Quinn, D. , & နားမှာ, K. (2015) ။ virtual romantic အခင်းအကျင်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်မိတ်ဖက်စံနမူနာများအကြားရိပ်မိကွာဟမှုအမျိုးသမီးများနှင့်ယောက်ျားအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဏ်ကိုကွဲပြားခြားနားကွဲပြားခြားနားသည်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 73 (9-10), 442-452 ။ Doi:
10.1007/s11199-015-0533-6 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
122 ။ * Pennel, အိပ်ချ်, & Behm-Morawitz, အီး (2015) ။ အဆိုပါအာဏာ (စူပါ) သူရဲကောင်း? စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ကားများတွင်လိင်ဆိုင်ရာလိင်အင်္ဂါဇာတ်ကောင်များ၏အမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 72 (5-6), 211-220 ။ Doi:
10.1007/s11199-015-0455-3 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
123 ။ * ပေတရု, ဂျေ, & Valkenburg, P. (2007) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာမီဒီယာပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများကဲ့သို့သူတို့၏အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆများနှင့်ထိတွေ့မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 56, 381-395 ။ Doi:
10.1007 / s11199-006-9176-y က [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
124 ။ Petersen, ဂျေ, & Hyde, JS (2013) ။ ရွယ်တူချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်အစာစားခြင်းပျက်ပြားခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ, 49 (1), 184-195 ။ Doi:
10.1037 / a0028247 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
125 ။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, HG, Olivardia, R. , Borowiecki, JJ, & Cohane, GH (2001) ။ အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်၏စီးပွားဖြစ်ကြီးထွားလာနေသောတန်ဖိုး - အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းများတွင်ကြော်ငြာခြင်းကိုနှစ်ရှည်လများလေ့လာခြင်း။ Psychotherapy နှင့် Psychosomatics, 70, 189-192 ။ Doi:
10.1159 / 000056252 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
126 ။ * Prichard, ဗြဲ, & Tiggemann, အမ် (၂၀၁၂) ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောစံပြဂီတဗီဒီယိုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေ၊ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 67 (3-4), 201-210 ။ Doi:
10.1007 / s11199-012-0167-x[CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
127 ။ Prieler, အမ်, & Centeno, ((2013) ။ ဖိလစ်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်ကျား၊ မရေးရာကိုယ်စားပြုမှု လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 69 (5-6), 276-288 ။ Doi:
10.1007/s11199-013-0301-4 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
128 ။ * Puvia, အီး, & Vaes, ဂျေ (၂၀၁၃) ။ ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်း - အမျိုးသမီးများ၏အသွင်အပြင်သည်မိမိကိုယ်ကိုအမြင်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်သောအမျိုးသမီးများ၏ပစ်မှတ်များကိုလူမဆန်စွာဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 68 (7-8), 484-495 ။ Doi:
10.1007 / s11199-012-0255-y က [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
129 ။ ရမ်းဆေး, အယ်လ်, & Hoyt, တီ (2015) ။ အလိုဆန္ဒ၏ရည်ရွယ်ချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုကိုမည်ကဲ့သို့သတ်မှတ်ခံရသည်။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 39 (2), 151-170 ။ Doi:
10.1177 / 0361684314544679 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
130 ။ Rideout, VJ, Foehr, UG, & Roberts, DF (2010, January) ။ မျိုးဆက် M က2: 8 နှစ်အရွယ်မှ 18- ၏ဘဝအသက်တာ၌မီဒီယာ။ Menlo Park, CA: ဟင်နရီ J.Kaiser မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းမှ။ မှရယူရန် http://eric.ed.gov/?id=ED527859
131 ။ * Rollero, C. (2013) ။ objectification facing ယောက်ျားမိန်းမတို့: သုခချမ်းသာ, Self-လေးစားမှုနှင့် ambivalent sexism အပေါ်မီဒီယာမော်ဒယ်များ၏ဆိုးကျိုးများ။ Revista De Psicologíaလူမှု: လူမှုစိတ်ပညာ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 28 (3), 373-382 ။ Doi:
10.1174 / 021347413807719166 [တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
132 ။ Romero-Sanchez, M. , Toro-Garcia, V. , Horvath, MA, & Megias, JL (2015) ။ မဂ္ဂဇင်းတခုထက်မက - ယောက်ျားလေးများမဂ္ဂဇင်းများအကြားဆက်နွယ်မှုများကိုရှာဖွေခြင်း၊ Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ်။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။ Doi:
10.1177 / 0886260515586366 [CrossRef]
133 ။ Rouner, D. , Slater, MD, & Domenech-Rodriguez, အမ် (2003) ။ ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်ကျား, မအခန်းကဏ္ and နှင့်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များ၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အကဲဖြတ်။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏ဂျာနယ်, 47 (3), 435-454 ။ Doi:
10.1207 / s15506878jobem4703_7[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
134 ။ Rudman, အယ်လ်, & Borgida, အီး (1995) ။ ဆောက်လုပ်နိုင်မှု၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှု - ယောက်ျားများအားအမျိုးသမီးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများအဖြစ်ရှုမြင်ရန်အစပြုခြင်း၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ။ စမ်းသပ်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 31, 493-517 ။ Doi:
10.1006 / jesp.1995.1022 [CrossRef],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
135 ။ * Schmidt, AF, & Kistemaker, LM (2015) ။ ပြန်လည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ခန္ဓာကိုယ် - ပြောင်းပြန်လှန်ယူဆချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification သို့မဟုတ်အတိုင်းအတာများရှေးဟောင်းပစ္စည်း၏ခိုင်လုံသောညွှန်ပြချက်? သိမှတ်ခံစားမှု, 134, 77-84 ။ Doi:
10.1016 / j.cognition.2014.09.003 [CrossRef], [PubMed],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
136 ။ * Schooler, ဃ (2015) ။ ငါ့ထံသို့လာမယ့်ထိုမိန်းမ: အစွမ်းထက်ချိတ်တွဲနှင့်အမျိုးသမီး၏ကိုယ်စားပြုမှု objectifying ။ လူမှုရေးကိစ္စများ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်ပြည်သူ့ပေါ်လစီ, 15 (1), 198-212 ။ Doi:
10.1111 / asap.12070 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
137 ။ Schooler, D. , ရပ်ကွက်, LM, Merriwether, အေ, & Caruthers, အေ (2004) ။ White White နှင့် Black အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္developmentာန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်ရုပ်မြင်သံကြား၏အခန်းကဏ္။ ။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 28, 38-47 ။ Doi:
10.1111 / j.1471-6402.2004.00121.x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
138 ။ * Slater, အေ, & Tiggemann, အမ် (2015) ။ မီဒီယာများထိတွေ့မှု၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အသွင်အပြင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မှတ်ချက်များသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မိန်းကလေးများ၏မိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 39 (3), 375-389 ။ Doi:
10.1177 / 0361684314554606 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
139 ။ * စမစ်, LR (2015) ။ အကောင်းဆုံးကိုထိတွေ့မှုကဘာလဲ? ဆန်းစစ်မီဒီယာအမျိုးသမီးအားကစားသမား၏ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ကောလိပ်အားကစားသမား '' Self-objectification အပေါ်သက်ရောက်မှု။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အားကစား။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။ Doi:
10.1177 / 2167479515577080[CrossRef]
140 ။ Smith, SL, Choueiti, အမ်, Prescott, အေ, & Pieper, K. (2012) ။ ကျားမအခန်းကဏ္ဍနှင့်အလုပ်အကိုင်: ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်ဇာတ်ကောင် attribute တွေနှင့်အလုပ်အကိုင်-related မျှော်မှန်းချက်မှာတစ်ဦးကကြည့်။ မီဒီယာများတွင်ကျားမအပေါ်ကျား Davis ကအင်စတီကျု။ မှရယူရန် http://seejane.org/wp-content/uploads/full-study-gender-roles-and-occupations-v2.pdf
141 ။ Spitzack, C. (1990) ။ အမျိုးသမီးများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လျှော့ချရေး၏နိုင်ငံရေးကို: ပိုလျှံဘျော။ အယ်လ်ဘာနီ: New York ကစာနယ်ဇင်းများ၏ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်။
142 ။ * Sprankle, EL, End, CM, & Bretz, MN (၂၀၁၂) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုတ်ညံ့သောဂီတဗီဒီယိုများနှင့်သီချင်းစာသားများ - ယောက်ျားများ၏ကျူးကျော်မှုနှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္andာရီများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျပုံစံများအပေါ်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ မီဒီယာစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 24 (1), 31-39 ။ Doi:
10.1027 / 1864-1105 / a000060 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
143 ။ Stankiewicz, JM, & Rosselli, အက်ဖ် (2008) ။ ပုံနှိပ်ကြော်ငြာများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ပစ္စည်းနှင့်သားကောင်များဖြစ်သည်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 58 (7-8), 579-589 ။ Doi:
10.1007/s11199-007-9359-1 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
144 ။ * Starr, C တို့, & ဖာဂူဆန်, G. အ (2012) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရုပ်များ၊ မိန်းကလေးငယ်များမိမိကိုယ်ကိုလိင်မှုပြုခြင်းအပေါ်မီဒီယာနှင့်မိခင်လွှမ်းမိုးမှုများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 67 (7-8), 463-476 ။ Doi:
10.1007 / s11199-012-0183-x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
145 ။ * ကျောက်ခေတ်, အီး, ဘရောင်း, C တို့, & Jewell, ဂျေ (2015) ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိန်းကလေး - မူလတန်းကျောင်းကလေးများအကြားတစ် ဦး ကအတွင်း - ကျားပုံစံ။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, 86, 1604-1622 ။ Doi:
10.1111 / cdev.12405 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
146 ။ * Strahan, အီး, Lafrance, အေ, Wilson က, အေ, Ethier, N. , Spencer, SJ, & Zanna, အမ် (2008) ။ ဗစ်တိုးရီးယား၏ညစ်ပတ်လျှို့ဝှက်ချက် - လူမှုယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 34 (2), 288-301 ။ Doi:
10.1177 / 0146167207310457 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
147 ။ * Swami, V. , Coles, R. , Wilson က, အီး, လမ်, N. , Wyrozumska, K. , & Furnham, အေ (2010) ။ ပြဇာတ်မှဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သောယုံကြည်ချက်များ - အလှတရားစံနမူနာများနှင့်အလေ့အကျင့်များအကြားဆက်စပ်မှုများ၊အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 34, 365-379 ။ Doi:
10.1111 / j.1471-6402.2010.01582.x [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
148 ။ * Ter Bogt, TFM, Engels, RCME, Bogers, S. , & Kloosterman, M. (2010) ။ “ ကလေးငယ်ကိုလှုပ်ခါပါ၊ လှုပ်ခါ” - ဆယ်ကျော်သက်များကြားမီဒီယာကြိုက်နှစ်သက်မှုများ၊ လိင်သဘောထားများနှင့်ကျား၊ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 63 (11-12), 844-859 ။ Doi:
10.1007/s11199-010-9815-1[CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
149 ။ * Tiggemann, အမ်, & Slater, အေ (2015) ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် Self-objectification ၏အခန်းကဏ္:: ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အကျိုးဆက်များ။ ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 40 (7), 704-711 ။ Doi:
10.1093 / jpepsy / jsv021 [CrossRef], [PubMed],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
150 ။ Tiggemann, အမ်, & Williams က, အီး (2012) ။ အမျိုးသမီးများအကြားမသန်မစွမ်းသောအစားအစာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများတွင်မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္: ။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 36, 66-75 ။ Doi:
10.1177 / 0361684311420250 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
151 ။ Tolman, DL, Kim, JL, Schooler,,, & Sorsoli, CL (2007) ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း - ကျား၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်, 40 (1),
10.1016 / j.jadohealth.2006.08.002 [CrossRef]
152 ။ Turner, JS (2011) ။ လိင်နှင့်ဂီတဗီဒီယိုများ၏မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သော: သီချင်းဗီဒီယိုများအတွက်ပြိုင်ပွဲနှင့်လိင်၏ပုံဖော်ခြင်း၏စာမေးပွဲ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 64 (3-4), 173-191 ။ Doi:
10.1007/s11199-010-9766-6 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
153 ။ Uray, N. , & Burnaz, အက်စ် (2003) ။ တူရကီရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်ကျား၊ မရေးရာအခန်းကဏ္al၏သရုပ်ဖော်မှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 48 (1-2), 77-87 ။ Doi:
10.1023 / A: 1022348813469 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
154 ။ * Vaes, ဂျေ, Paladino, P. , & Puvia, အီး (2011) ။ လိင်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများသည်လူသားများဖြစ်ပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်အမျိုးသမီးများကိုလူမဆန်စွာပြုခြင်းသည်။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဥရောပဂျာနယ်, 41, 774-785 ။ Doi:
10.1002 / ejsp.v41.6 [CrossRef],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
155 ။ * Vance, K. , Sutter, အမ်, Perrin, P. , & Heesacker, အမ် (2015) ။ မီဒီယာများမှအမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဒဏ္myာရီပုံပြင်များကိုလက်ခံခြင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ။ ကျူးကျော်များ၏ဂျာနယ်, မတရားသဖွငျ့နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ, 24 (5), 569-587 ။ Doi:
10.1080 / 10926771.2015.1029179 [တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
156 ။ * Vandenbosch, L. , & Eggermont, အက်စ် (2012) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ခြင်းကိုနားလည်ခြင်း - မီဒီယာများနှင့်ပြည့်စုံသောချဉ်းကပ်မှုနှင့်မိန်းကလေးများသည်အလှတရားစံနမူနာများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 62 (5), 869-887 ။ Doi:
10.1111 / jcom.2012.62.issue-5 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
157 ။ * Vandenbosch, L. , & Eggermont, အက်စ် (2013) ။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: မီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ကောင်လေး၏အသွင်အပြင်စံနမူနာများ၊ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်, 16 (3), 283-306 ။ Doi:
10.1177 / 1097184X13477866 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
158 ။ * Vandenbosch, L. , & Eggermont, အက်စ် (2015) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်မီဒီယာ၏အခန်းကဏ္: - အဆင့်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သောမိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်စဉ်၏ရှင်းလင်းတန်ဖိုးကိုရှာဖွေခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44 (3), 729-742 ။ Doi:
10.1007/s10508-014-0292-4 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
159 ။ * Vandenbosch, L. , Muise, အေ, Eggermont, အက်စ်, & Impett, EA (2015) ။ အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားကို Sexualizing: ရိုနှင့်ပြည်နယ် Self- objectification နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်, 13, 62-66 ။ Doi:
10.1016 / j.bodyim.2015.01.003 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
160 ။ * Wack, အီး, & Tantleff-Dunn, အက်စ် (2008) ။ Cyber ​​sexy - အီလက်ထရွန်နစ်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားယောက်ျားများကြားတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမြင်များ။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်,5(4), 365-374 ။ Doi:
10.1016 / j.bodyim.2008.06.003 [CrossRef], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
161 ။ Wallis ဟာ, C. (2011) ။ ဖျော်ဖြေကျား: သီချင်းဗီဒီယိုများအတွက်ကျားမ display ရဲ့တစ်ဦးကအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 64 (3-4), 160-172 ။ Doi:
10.1007/s11199-010-9814-2 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
162 ။ * ရပ်ကွက်, LM (2002) ။ ရုပ်မြင်သံကြားထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' သဘောထားများနှင့်ယူဆချက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား? ဆက်စပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်အတည်ပြုချက်။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 31 (1), 1-15 ။ Doi:
10.1023 / A: 1014068031532 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [CSA]
163 ။ ရပ်ကွက်, LM (2003) ။ ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: အမေရိကန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 23 (3), 347-388 ။ Doi:
10.1016/S0273-2297(03)00013-3 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
164 ။ * ရပ်ကွက်, LM, & Friedman, K. (2006) ။ တီဗွီကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း - ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်, 16 (1), 133-156 ။ Doi:
10.1111 / j.1532-7795.2006.00125.x [CrossRef],[သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
165 ။ ရပ်ကွက်, LM, Hansbrough, အီး, & Walker က, အီး (2005) ။ တေးဂီတဗီဒီယိုထိတွေ့မှုမှ Black မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပရိယာယ်များ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 20, 143-166 ။ Doi:
10.1177 / 0743558404271135 [CrossRef], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
166 ။ ရပ်ကွက်, LM, Rivadeneyra, R. , သောမတ်စ်, K. , နေ့, K. , & Epstein, အမ် (2012) ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့တန်ဖိုးရှိ: ဂီတဗီဒီယိုက Black အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။ အီး Zurbriggen & T.-A. ၌ ရောဘတ် (Eds ။ ), မိန်းကလေးများနှင့် girlhood များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: အကြောင်းရင်းများ, အကျိုးဆက်များနှင့်ခုခံရေး (စစ။ 39-62) ။ နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
167 ။ * ရပ်ကွက်, LM, Seabrook, RC, Manago, အေ, & ရိဒ်, အယ်လ် (2016) ။ ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာများ၏ပါဝင်မှုများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 74 (1), 12-23 ။ Doi: 10.1007 / s11199-015-0548-z [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
168 ။ * ရပ်ကွက်, LM, Vandenbosch, အယ်လ်, & Eggermont, အက်စ် (2015) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ယောက်ျားလေးများသည်လိင်တူချစ်သူများ၏မုန်းတီးမှုများနှင့်ပိုးပန်းခြင်းယုံကြည်မှုများအပေါ်အမျိုးသားမဂ္ဂဇင်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 39, 49-58 ။ Doi:
10.1016 / j.adolescence.2014.12.004 [CrossRef],[PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
169 ။ * Wookey, အမ်, ချိုင်း, N. , & ဘတ္, JC (2009) ။ အမျိုးသမီးများ၏အရည်အချင်းကိုသိနားလည်နိုင်ရန်အတွက် sexy အသွင်အပြင်၏ဆိုးကျိုးများ။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 149 (1), 116-118 ။ Doi:
10.3200 / SOCP.149.1.116-118 [တေလာနှင့် Francis Online], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
170 ။ Wright, PJ (2009) ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖျော်ဖြေရေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးမက်ဆေ့ခ်ျမြား: A ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပေါင်းစပ်။လိင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု, 13, 181-200 ။ Doi:
171 ။ * Wright, PJ, & Tokunaga, RS (၂၀၁၅) ။ အမျိုးသားများကမီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုတားမြစ်သည်၊ အမျိုးသမီးများအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံသည့်သဘောထားများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။ Doi:
172 ။ * Yao, အမ်, Mahood, C တို့, & Linz, D. (2009) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းမှုများ၊ လိင်ဆိုင်ရာစော်ကားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ - လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း၏သိမြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 62, 77-88 ။ Doi:
10.1007/s11199-009-9695-4 [CrossRef],[PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
173 ။ Zurbriggen, အီး (2013) ။ Objectification, Self-objectification နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲမှု။ လူမှု၏ဂျာနယ်နှင့်နိုင်ငံရေးစိတ်ပညာ, 1, 188-215 ။ Doi:
10.5964 / jspp.v1i1.94 [CrossRef]
174 ။ * Zurbriggen, အီး, ရမ်းဆေး, အယ်လ်, & Jaworski, ခ (2011) ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းများတွင်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်မိတ်ဖက်ပြုခြင်း - မီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 64, 449-462 ။ Doi:
10.1007/s11199-011-9933-4 [CrossRef],[PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]